NYI LYNN SECK 18+ DEN: 2007
Posted by NLS at 12/28/2007 04:07:00 PM0comments Links to this post
ဘာကြောင်တာလဲ ဆိုတဲ့မင်းအသံလေးနဲ့ပဲ ထုပ်သိမ်းမယ်။
နေ့ည တွေးသမျှ အတွေးတွေအကုန်လုံး
အကြီးကျယ်ဆုံး အရှုံးတစ်ခု သိမ်းမယ်။
အဖျားတွေ တသက်လုံးသိမ်းပါလား တဲ့
Credit to Hsu Wai : Hololodilolo
Thanks PW for sharing that poem. :)
Posted by NLS at 12/24/2007 07:26:00 PM7comments Links to this post
Invite you all to come and visit my Picasa Web Photo Albums.
Above photos are in 1300x Pixels. Allow to use in any kinda area, except commercial.
Posted by NLS at 12/24/2007 06:27:00 PM2comments Links to this post
ဇှောဂျီဖောင့်ကို အသစ်ထပ်မံ ပြုပြင်ထားတာ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ အရင်ဖောင့်မှာတုန်းက ပီဒီအဖ် ထုတ်လိုက်ရင် သဝေထိုးက A ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါကိုလည်း ပြုပြင်ထားပါတယ်။ သုညနဲ့ ဝလုံးကို ခွဲခြားပေးထားပါတယ်။ ဝလုံးကို ရိုက်ချင်ရင် Shift+, ဖြစ်လာပါတယ်။ ဖောင့်ရှိရုံနဲ့ စာရိုက်လို့မရသေးပါဘူး။ ဒီတော့ ဇှောဂျီကီးဘုတ်ကို သွင်းပေးရပါမယ်။ နောက်ဆုံးထုတ် ကီးဘုတ်ဗားရှင်းမှာ System fonts တွေကိုပါ အလိုအလျောက် ပြောင်းပေးတာကြောင့် ကိုယ်ဘာမှတောင် လုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကီးဘုတ်ထဲမှာ Default ထည့်ထားတဲ့ ဇှောဂျီဖောင့်က ဗားရှင်း နိမ့်နေသေးတာမို့ အခုနောက်ဆုံး ဖောင့်အသစ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထပ်ထည့်ပေး ရပါမယ်။ ဖောင့်ကို ထည့်သွင်းတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ရံ အခက်အခဲ ကြုံနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ စက်ကို SafeMode ထဲကနေဝင်ပြီး ဖောင့်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ကဲ နောက်ဆုံး ကီးဘုတ်နဲ့ ဖောင့်တွေကို ဒီနေရာမှာ ရယူကြပါ။
1. Install Zawgyi Keyboard
2. Install Latest Zawgyi Font (overwrite previous one)
4. Use Shift+Clt to switch Eng & Myanmar font alternately.
5. If you still cant see the font from other website, Just adjust your Browser.
Posted by NLS at 12/20/2007 02:10:00 PM3comments Links to this post
Can I bearealistic artist now? မခက်လှပါဘူးဗျာ။ :)
Posted by NLS at 12/20/2007 02:04:00 PM0comments Links to this post
The first one was taken near MBK, Bangkok at around 6pm. Original one is colorful, but I touched up and mixed up with some effects to turn it likes Gloomy+Glamour photo. The second portrait was taken by Nikon D200 with Wide Angle Lens, effect is same too.
Posted by NLS at 12/20/2007 01:40:00 PM 1 comment Links to this post
ဪ အသက်တစ်ရာ မနေရ အမှုတစ်ရာ ကြုံရ။ ကိုယ့်ဘာသာ အကြောင်းရှိလို့ ဘလော့ဂ် ပိတ်ထားတာလည်း ရင်မဆိုင်ရဲလို့ ပိတ်တယ် ဖြစ်ရသေးတယ်။ ဒီကြားထဲ အင်တာဗျူးက နှောက်ယှက်သေးတယ်။ ငါပြောတာတွေ အားလုံးမထည့်ဘဲ လွတ်တာတွေပဲ ထည့်တော့ ငါ့အင်တာဗျူး ငါပြန်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် သောက်မြင်ကတ်လာတယ်။ မဂဿဂဇင်းထဲက လေသံက ဆောင့်ကြွားကြွား ဖြစ်နေတယ်။ ရည်ရွယ်တာတွေ အားလုံး မပါလာဘူး။ စကားလုံး တစ်လုံးမှာ အင်အားရှိတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေကို ဂရုတစိုက် ပြောနေတာကို ဖြုတ်ချင်တာဖြုတ်ပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြတယ်။ ကျွန်တှော သေချာပြောပါတယ်။ တချို့ စကားတွေက Off Topic ပါလို့။ ကျွန်တှော ဘာပြသဿသနာမှ မဖြစ်လိုပါဘူးလို့။ ဒီလောက် ပြောထားရဲ့သားနဲ့ တချို့ဟာတွေကို ထည့်ခဲ့သေးတယ်။ ကျွန်တှော အရွယ်သုံးပါးမရွေး ဘယ်သူ့ကိုမဆို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ ဆက်ဆံပါတယ်။ ထားပါတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ သူတို့လာဗျူးတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ဆက်ဆံပါတယ်။ စာအုပ်ထဲကလို လေသံတွေက မာမနေပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီနေ့ကစပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်အကြောင်းမှ ပြောပြရန် မရှိပါ။ အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း မတက်ရောက်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အင်တာဗျူးများ စကားစမြည်များလည်း ပြောကြားရန် မရှိပါ။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တှော့ဘလော့ဂ်ကို တန်းပလိတ် အသစ်လေး ပြင်နေတယ်။ ၂ဝဝဂမှာ အသစ်လေး ဖြစ်ချင်တယ်။ အလုပ်က အရမ်းရှုပ်နေတာမို့ အဲဒီဘက်ကို လုံးဝမလှည့်အားသေးဘူး။ ဟိုပြင်ဒီပြင်မို့လို့ရယ် အလုပ်ထဲမှာ ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆုပေးဖို့ ရှိတာတွေရယ်ကြောင့် ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ သူများတွေ လာပြောလို့ ကိုယ့်အကြောင်း ရေးထားတဲ့ အင်တာနက် ဆိုဒ်တွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့မှ ကျွန်တှောလည်း သူတို့လုပ်မှ မြန်မာပြည်ရဲ့ အရေးအပါဆုံး ပုဂဿဂိုလ်ကြီးလိုလို ဘာလိုလို ညာလိုလို ဖြစ်တော့တယ်။ ဒီမှာက ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်။ တှောတှောလည်း အံ့ဩမိတယ်။ ကျွန်တှောဟာ သာမန် နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ့်ထင်တာ၊ မြင်တာ၊ တွေးတာလေးတွေ ရေးတာတောင်မှ နိုင်ငံဖျက်မယ့်ကောင် ပုံစံနဲ့ နာမည်တပ်ပြီး ဝိုင်းဆှောကြသေးတယ်။ ဖတ်ရတဲ့ စာတွေဟာ အရေးအသား ရင့်သီးတယ်။ သူတို့ ခွင့်လွှတ်မှ ထမင်းစားရမယ့် လေသံမျိုးတွေ လုပ်ကြသေးတယ်။ ကျွန်တှော ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေတာပါ။ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်ရှာစားနေတာပါ။ ဘယ်သူ ဘယ်လိုထင်ထင် ကျွန်တှော လုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်ဘူး၊ အကျိုးရှိတယ်ထင်ရင် လုပ်မှာပါ။
ကိုယ်နဲ့ အယူအဆ မတူရင် သူတစ်ပါးကို နာမည်တပ်ပြီး မကောင်း ပြောတတ်တာကတော့ ဆိုးရွားပါတယ်။ ဒီရွာကို ဒီလမ်းက သွားမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားလမ်းတွေကလည်း ရောက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကျွန်တှောလို ကောင်ကိုတောင် လိုက်ပြောနေမယ့်အစား ကိုယ်ယုံကြည်ရာလေးကို ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွား သွားမယ်ဆိုရင် အလုပ်လည်း ပိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စာလေး တစ်ပုဒ်လောက်ဖတ်ပြီး လူတစ်ယောက်ကို အကဲမဖြတ်သင့်ပါဘူး။ ကျွန်တှောလည်း ကျွန်တှော့ကို လေးစားအောင် ဘာမှ လုပ်မနေပါဘူး။ လေးစားပါ လေးစားပါလို့လည်း ပြောမနေပါဘူး။ ကျွန်တှောလုပ်နေတာ အကောင်းတွေချည်းပဲလို့ မပြောပါဘူး။ အခုတော့ ဒီလူတွေ လုပ်ပုံက ကျွန်တှော့ကို အစွန်းမရောက်ရောက်အောင် လုပ်နေသလိုပါပဲ။
မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်မကျယ်ပြန့်ရင် ဘယ်လိုမှ ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒီယာခေတ် မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလို မကျယ်ပြန့်သရွေ့ အဲဒီအပှေါက ကျယ်ပြန့်တဲ့ အင်တာနက် စီးပွားရေးကို ကျွန်တှောတို့ ဖှောဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို လုပ်နိုင်ဖို့ မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက် သုံးစွဲသူတွေ သန်းချီပြီး ရှိလာမှ ဖြစ်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ထင်နေသလို ကျွန်တှောက ဘလော့ဂ်လေးကို ကြည့်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တှော အဲဒါကနေ ပှေါလာမယ့် အကျိုးဆက် အပှေါမှာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ တစ်ခုကို လုပ်မလို့ ကြည့်နေတာ။ ဒီလောက်ပဲ ပြောပြပါဦးမယ်။ ကျွန်တှောက ဟိုးအဝေးကြီးက အလုပ်တစ်ခုကို ကြည့်နေတယ် ခင်ဗျားတို့က လက်ရှိအရာလေး တစ်ခုအပှေါမှာ လာတိုက်ခိုက်နေကြတယ် ဆိုတော့ နဲနဲ ဝေးသွားပြီဗျာ။ ကျွန်တှော ငရဲသွားလည်း လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီး ဘယ်သူ့မှ မခှေါပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီလိုကောင် ကျမယ်ဆိုလည်း ဂရုစိုက် ကြည့်မနေပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ အချိန်ကုန်ပါတယ်။ ကျွန်တှော သိလိုက်တာက ခင်ဗျားတို့ဟာ လူတစ်ယောက်ကို စည်းရုံးနည်း အတတ်ပညာကို မသိဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဒီဘလော့ဂ် နယျူးရီးယားမှ ပြန်စဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တန်းပလိတ် အသစ်လေး လုပ်နေတယ်။ အခုတော့ ခင်ဗျားတို့ အပြစ်ထပ်ရှာချင်ရင် တွေ့နိုင်အောင် ပြန်ဖွင့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကုဒ်တွေ မပြင်ရသေးတာမို့ အဆင်မပြေသေးရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
Posted by NLS at 12/10/2007 12:47:00 PM 10 comments Links to this post
This blog is under repairing and will re-establish again hopefully end of December. Sorry for everything if it is unconvenience for you. You will see this blog as new look and different style at New Year. :)
Posted by NLS at 12/06/2007 09:13:00 AM 1 comment Links to this post
Posted by NLS at 11/28/2007 09:50:00 AM5comments Links to this post
Posted by NLS at 11/28/2007 09:26:00 AM0comments Links to this post
ရန်ကုန်မှာ မီးတွေ ပြတ်နေပြန်ပြီ။ သိပ်စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ စိတ်ဓာတ်လည်း ကျတယ်။ ည၁ဝနာရီ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ အိမ်ပြန်လာရင် ရင်ဝကို ဆောင့်ကန်ခံရသလိုပဲ မီးကမလာတော့ ၁၁ထပ်ကို သေအောင် တက်ရတယ်။ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်လေးတွေကို စိတ်ကူးလေးကောင်းတုန်း လုပ်မယ်ဆိုပြီး မီးလာအောင် စောင့်တယ်။ ၁၂ခွဲ တစ်နာရီမှ လာတယ်။ ပြီးရင် ကြောင်သေးပေါက်သလောက် လာပြီး ပြန်ပျက်သွားပြန်ရော။ မနက်မိုးလင်းရင် မီးက ပျက်နေပြီ။ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ရမလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ လျှပ်စစ်ဒုကဿခ ခံစားနေရတာ ကြာလှပြီ။ ဝန်ကြီးလည်း သူတို့အိမ်တွေ မီးမပြတ်တော့ အပြင်မှာ မီးတွေပြတ်နေတာ ဘယ်လို သိပါတော့မလဲ။ မီးတွေပျက်ရင် ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိဘူး။ အခုလည်း အလုပ်လုပ်နေရင်း တန်းလန်း မီးပျက်သွားတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကန်တှောလေးဘက်က မီးပျက်တဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့။ တီဗွီတွေ၊ ဒီဗွီဒီတွေလည်း ကြည့်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေ အဆင့်မီမီ လူလိုနေနိုင်ဖို့နဲ့ သာမန်အလုပ်လေး လူလုပ်ချိန် လုပ်နိုင်ဖို့ မီးလိုတာပါ။ နွေရာသီကျတော့ ရေမရှိလို့၊ မိုးရာသီကျတော့ ၃လလောက် လာလိုက်၊ ပြီးရင် အခု ဆောင်းတောင် ကောင်းကောင်း မကူးချင်သေးဘူး မီးတွေ ပျက်လာပြီ။ ... ရေ ငါဘာလုပ်ရမှန်း၊ ဘယ်နေရာမှာ နေရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး သူငယ်ချင်းရယ်။ လမ်းကြုံရင် နင့်ပါးပါးကို ပြောပြလိုက်ပါဦးကွယ် အပြင်မှာ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ။ သိပ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ် မီးရယ်။ မင်းကိုယ့်ကို နှိပ်စက်နိုင်လွန်းတယ်။
Posted by NLS at 11/23/2007 09:16:00 AM0comments Links to this post
Please add your address at only that post's comment, not anywhere, with this form (http://yourblog.blogspot.com) (Blog Category)
Posted by NLS at 11/22/2007 10:46:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 11/21/2007 05:39:00 PM0comments Links to this post
ကျွန်တှော့အတွက် ဘလော့ဂ်ဆိုတာ အပျှောရေးတယ် ဆိုတာထက် ပိုပြီး ကျယ်ဝန်းတဲ့ အဓိပဿပာယ် ရှိလာပါပြီ။ ဒီဘလော့ဂ်ကြောင့် ကျွန်တှောဟာ ဝါသနာတူ မိတ်ဆွေတွေ ရလာတယ်။ ကိုယ်မသိတဲ့ နည်းပညာတွေ ဖလှယ်ခွင့် ရလာတယ်။ ကူညီမယ့်သူတွေ အများကြီး ရလာတယ်။ နောက်ဆုံး အခု အလုပ်ရတယ် ဆိုတာတောင် ဒီဘလော့ဂ်ကြောင့် လို့ပြောရင် မမှားနိုင်ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကနေ မိတ်ဆက်ပေးလို့ ဆရာတစ်ယောက်နဲ့လည်း သိကျွမ်းရပါတယ်။ ဆရာက ကျွန်တှောလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို သဘောကျလို့ဆိုပြီး သူ့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ ရှားပါးစာအုပ်တွေကို ဝေမျှပါတယ်။ ပိုက်ဆံထက် ဒီလို စာအုပ် ဝေမျှတာကို ကျွန်တှော တှောတှော ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတိုင်း စာအုပ်ကောင်းတွေ ဝယ်လို့ မရပါဘူး။ တချို့စာအုပ်တွေက အဟောင်းတန်းမှာ သွားရှာရင်တောင် မရှိနိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက ကြိုးမညီတဲ့ ဂစ်တာကို တီးရင် အသံကြောင်သလို အယူအဆ အတွေးအခှေါ မတူသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာ လူဟာ ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့ အပ်စပ်ရာ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ စကားပြောရတဲ့အခါ တှောတှော စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ ဆရာဦးကိုကိုလွင် ကျွန်တှော့ကို ပေးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲက တစ်အုပ်ဟာ ဟိုတလောကမှ ကျွန်တှော သွားကြည့်ပြီး ဈေးများလွန်းတာနဲ့ မဝယ်နိုင်လို့ ပစ်ထားလိုက်ရတဲ့ ပညာရပ်ဝေါဟာရများ အဘိဓာန် ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။ အဲဒီစာအုပ် တစ်အုပ်နဲ့တင် တှောတှော ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဆရာမိတ်ဆက်ပေးလို့ Social Work လုပ်နေကြတဲ့ ကျောင်းသား အများကြီးနဲ့လည်း သိကျွမ်းရပြန်သေးတယ်။ တှောတှောများများက သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် အသီးသီးက ဘွဲ့ရတွေ၊ မာစတာတွေ၊ ပီအိတ်ခ်ျဒီ တွေပါ။ ဆရာက အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်ပွဲလေး တစ်ခု လုပ်ဖို့ ပြောတာမို့ လာမယ့် တနဂဿငနွေကို ချိန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တကယ်ဆို ကျွန်တှော အားတာ တစ်ပတ်မှ ဒီတစ်ရက်ထဲပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော့အတွက် အကျိုးရှိသလို သူများအတွက်လည်း အကျိုး ရှိနိုင်တာမို့ ချိန်းဖြစ်တာပါ။ အဲဒီပွဲမှာ ကျွန်တှော့ဘက်က အချက် နှစ်ချက်ကို ဆွေးနွေးပါမယ်။ တစ်ချက်က လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ရပ်တည်မှုပါ။ နောက်ခေါင်းစဉ် တစ်ခုက Digitalization ဆိုတာပါ။ အချင်းချင်း Interactive ပုံစံမျိုးနဲ့ သွားဖြစ်မယ်လို့တော့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ကျွန်တှော့ဆီက ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှု တစ်ခုခု သူတို့ရပြီး ကျွန်တှောက လူလေးငါးဆယ်ဆီက အများကြီး ပြန်ရမှာမို့ တန်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဆရာ ဦးကိုကိုလွင်နဲ့ Social Work ကကျောင်းသား အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by NLS at 11/21/2007 03:28:00 PM0comments Links to this post
Labels: Acknowledgement, Diary
ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူ စူးစမ်းချင်သူတွေ များလာတာနဲ့အမျှ အခက်အခဲတွေနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ တချို့လည်း စိတ်ကူးတွေက ကောင်းပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ကုဒ်တွေ မတတ်တော့ စိတ်ညစ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို မသိတာကို စမ်းလုပ်ရင်း လုပ်ရင်းကပဲ နောက်ဆုံး တတ်ကျွမ်း သွားကြပါလိမ့်မယ်။ အခု ကျွန်တှော ပြောပြချင်တဲ့ တူးလ်လေး တစ်ခုက ဘလော့ဂ်ပှေါမှာ ပိုစ့်တွေကို သွားမရေးဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘရောက်ဇာကနေ တိုက်ရိုက်ပို့တဲ့ တူးလ်လေးပါ။ အရင်တုန်းက ဒါကို Performancing Tool ဆိုပြီး သိကြပါတယ်။ အခုတော့ ScribeFire လို့ နာမည်ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတူးလ်လေးဟာ Text Editor တစ်ခုလို ပြည့်ပြည့်ဝဝ စွမ်းဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုစ့်တွေထဲမှာ Tags ထည့်တာတွေ၊ စာကြောင်းစီတာတွေ၊ Paragraph Layout စတာတွေကို အလွယ်တကူ ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါလေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် မီးလျှံမြေခွေး ဘရောက်ဇာကို အသုံးပြု ရပါမယ်။ ပြီးတဲ့အခါ www.scribefire.com ကနေ နောက်ဆုံးထုတ်တဲ့ Addon လေးကို Install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အဲဒီအဆင့် ပြီးတဲ့အခါ မိမိရဲ့ မီးလျှံမြေခွေး ဘရောက်ဇာကို ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ညာဘက် အောက်နားမှာ စာရွက်ပုံလေးတစ်ခု ပှေါလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ် အကောင့်ကို မေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ ဘလော့ဂ်မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ကိုယ့်နာမည်နဲ့ စကားဝှက်ကို အသုံးပြုပြီး ဖွင့်ပေးရပါမယ်။ ပုဂံနတ်ကြီး ဆာဗာအောက်က လူတွေကတော့ ဖိုင်းယားဖောက်စ်က ဒါကို ပိတ်ထားတာမို့ ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက်လေးတွေ သုံးရပါလိမ့်မယ်။ (အဲဒီအဆင့်ကို ကျှောလိုက်ပြီ)။ အဲဒါတွေ အားလုံးပြီးရင် ကိုယ့်ဘလော့ဂ်နာမည်လေး ပှေါလာပါလိမ့်မယ်။ စာကို အဲဒီအပှေါမှာ တခါတည်း ရိုက်ပြီး ပိုစ့်တွေ တင်နိုင်ပါပြီ။ တက်ခ် တွေလည်း ထည့်နိုင်ပါတယ်။ Save လုပ်ထားမယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ အပှေါက ပုံကတော့ ကျွန်တှော ဒါလေးကို အသုံးပြုပြီး တင်နေပုံပါ။ ပျှောရွှင်ပါစေ။
Posted by NLS at 11/21/2007 01:49:00 PM0comments Links to this post
Gawdi- ဂှေါဒိုင် (စကားလုံး သူပုန်)
စိတ်ဝင်စားစရာ မြန်မာဆိုဒ်လေးတွေ မညွှန်းဖြစ်တာ ကြာပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ ဒီဆိုဒ်လေး (Gawdi)ကို သွားတွေ့တယ်။ ဒီဆိုဒ်က မြန်မာ ဘန်းစကားတွေကို စုနေတဲ့ ဆိုဒ်ပါ။ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါမှ ခေတ်တစ်ခေတ်မှာ ပှေါပေါက်ခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတွေ ပျောက်ကွယ် မသွားမှာ။ တချို့စကားတွေဟာ ကိုယ့်နယ်မှာသာ အသုံးများတဲ့ စကားမျိုးပါ။ သူများနယ်က လူတွေ မသိနိုင်ပါဘူး။ တချို့စာလုံးတွေကလည်း ယောက်ျားလေး အချင်းချင်း ပြောဆို သုံးစွဲကြတဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စကားလုံးတွေပါ။ ညစ်ညမ်းစာလုံးလို့ အများသတ်မှတ်ကြတဲ့ စာလုံးတွေလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တှော ညွှန်းချင်တာက အရသာခံပြီး ဖတ်နေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို စကားလုံးတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို မှတ်တမ်းတင်နေတာမို့ ကိုယ်တိုင် သိတာလေးတွေလည်း ဝင်ထည့် နိုင်အောင်လို့ပါ။ ပြီးတော့ ခေတ်လူငယ်တွေ ဘာအထာနဲ့ သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက် စကားတွေကိုလည်း သိရတာပေါ့။ ဘာအကောင့်မှာ တည်ဆောက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ လွယ်လွယ် ဝင်ဖတ် ဝင်ရေးလို့ ရပါတယ်။ အရှက်ကြီးသူ သိပ်ယဉ်ကျေးသူများ သွားစရာ မလိုပါဘူး။ (18+)
Posted by NLS at 11/12/2007 05:32:00 PM0comments Links to this post
Labels: Interesting, Myanmar Idioms
Posted by NLS at 11/11/2007 01:47:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 11/11/2007 01:05:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 11/09/2007 06:59:00 PM0comments Links to this post
တစ်လတစ်ခါ ဆေးခန်းပို့ပေးစရာ မလိုသော
အပြင်မှ ပြန်လာလျှင် ပျူငှာစွာ ကြိုဆိုတတ်သော
ကြက်တူရွေး (အမ) တစ်ကောင်
နယ်အဝေး ညအိပ်ညနေ ခရီးထွက်နိုင်ရမည်။
Posted by NLS at 11/09/2007 06:46:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 11/08/2007 05:58:00 PM3comments Links to this post
Posted by NLS at 11/08/2007 05:54:00 PM0comments Links to this post
နေသာတဲ့ နေ့တွေ အကြောင်းပါ
နေ့တွေမှာ သင်ဟာ ရောက်မလာခဲ့ဘူး
ငါတို့ကိုယ်က နေရာတွေ မှားခဲ့ကြတယ်
မိုးများ သည်းစွာ ရွာသည်
စကဿငာပူက ညတစ်ညမှာ တထိုင်တည်း ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျားလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီကဗျာလေး သိမ်းပေးထားတဲ့ မမေကို သိပ်ကျေးဇူးတင်တယ်။
Posted by NLS at 10/31/2007 08:00:00 PM0comments Links to this post
Milestone 1000 Posts
မဂဿငလာပါ။ ဒီဘလော့ဂ်ဟာ ဒီနေ့ ပိုစ့် ၁၀၀၀ ပြည့်ပါတယ်။ ၉၉ဂမှာ တစ်နေတာ တှောတှောကြာပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်မအား၊ အင်တာနက် သုံးဖြစ်ရင်တောင် ဘလော့ဂ်ဘက် မရောက်ဖြစ်တာမို့ တှောတှောလေး အဆက်ပြတ်သွားတယ်။ ကျွန်တှော့ ဘလော့ဂ်ကို 18+ Den လို့အမည် ပေးထားတာ အကြောင်း ရှိပါတယ်။ Den ဆိုတော့ သားရဲတွင်းပေါ့။ ကျွန်တှော နားခိုရာ သားရဲတွင်းလို့ ဆိုချင်တာပါ။ သားရဲတွင်းဆိုတော့ အနံ့ဆိုးတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ စားကြွင်းစားကျန်တွေလည်း ရှိမယ်ပေါ့။ သားရဲတွင်းဆိုတော့ လှတပတ နေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသက် ၁ဂနှစ် ကျှောပြီးသူတွေ အတွက်သာ ရည်ရွယ်တာမို့ ၁၈+ လို့ တပ်ထားတာပါ။ အဓိကကတော့ ကျွန်တှော ဖတ်မိတာ၊ စမ်းမိတာ၊ သုံးမိတာတွေကို အမှတ်တရ ပြန်ပြီး သိမ်းဆည်းထားတဲ့ နေရာလေးပါ။ အရင်တုန်းကတော့ တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး သုံးလေးငါးပိုစ့် တင်ဖြစ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ သိပ်မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ ကျွန်တှော့ရဲ့ Blog Addict ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါကို ပျောက်အောင် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ မြန်မာပြည် မီးစနစ်နဲ့၊ အင်တာနက် စနစ်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်လိုက် ပါသေးတယ်။ လာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးနဲ့ သိသူ မသိသူ အားလုံးလည်း ဒီနေရာကနေ တစ်ခုခု ရတယ်ဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်။ ပုဂဿဂိုလ်ရေး ပါဆင်နယ် ကိစဿစတွေကလွဲလို့ ဒီနေရာမှာ အကြံပေးနိုင်၊ မေးမြန်းနိုင်၊ ညွှန်ပြ သင်ကြား ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ကနေ အတွေ့အကြုံတွေ မိတ်ဆွေတွေ အများကြီး ရခဲ့တယ်။ အကူအညီတွေ၊ အနှောက်အယှက်တွေလည်း အများကြီး ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမရတာထက်စာရင် တစ်ခုခု ရနေတာက အမြဲလှုပ်ရှားနေရတဲ့ ကျွန်တှော့ အတွက်တော့ အတွေ့အကြုံတွေလို့ ယူဆပါတယ်။ အမ်ပီတီမှာ မပိတ်ဘဲ၊ ပုဂံမှာ အပိတ်ခံထားရတဲ့ ဘလော့စပေါ့ကြီးလည်း အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ပွင့်သွားပါစေလို့ ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ်။
Posted by NLS at 10/30/2007 02:56:00 PM0comments Links to this post
မြန်မာယူနီကုဒ် စနစ်ကို သုံးသပ်ခြင်း
မြန်မာပြည်အတွက် လျာထားသော ယူနီကုဒ် များကို သုံးသပ်ခြင်း
ယူနီကုဒ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တှောတို့ မြန်မာအချင်းချင်း ပုတ်ခတ် ရန်လို တိုက်ခိုက်နေကြတာ တှောတှော ကြာလာပါပြီ။ သူတို့ကတော့ ယူနီကုဒ် ကွန်ဆိုတီယမ်ရဲ့ စနစ်ကို အပြည့်အဝ လိုက်နာ ကျင့်သုံးထားတယ်လို့ မြန်မာ၊ မိုင်မြန်မာ၊ ပိတောက်၊ ပုရပိုဒ် ဖောင့်စနစ်တွေက ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီ ကွန်ဆိုတီယမ်က ပြဋဿဌာန်းပြီး ကျွန်တှောတို့ မြန်မာ ပညာရှင်ကြီးများ လက်ခံထားတဲ့ ယူနီကုဒ်စနစ် ဗားရှင်း၅ကို လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစကားဟာ ပါဠိစကား မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မွန်စကားလည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ မြန်မာစာရဲ့ ရေသောက်မြစ်တွေ ဆိုတာကို လက်ခံပေမယ့် မြန်မာစကားစာ မြန်မာစကား ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာစာကို ပါဠိဘာသာနှင့် ယှဉ်ပြီး ချဉ်းကပ် လေ့လာခြင်းဟာ မှားယွင်းတယ်။ ကျွန်တှောတို့ မြန်မာစကားမှာ သရဟာ အသံသာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ သရ အသံထွက်ကို ရအောင်သာ စာလိုက် ရေးကြတာ၊ သရအတွက် သီးသန့် အကဿခရာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဩ၊ ဪ၊ ဥ၊ ဦ ကို သရယူနီကုဒ်တန်ဖိုး ပေးထားတာ အရမ်းကို အံ့အားသင့်မိတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပါဠိသက် ဝေါဟာရတွေအကြောင်း ပြောဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာစကားမှာ ပါဠိစကားလုံးတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့စကားလုံးတွေကို မြန်မာတွေက အပြီးအပိုင် မွေးစားလိုက် ပြီးပါပြီ။ အဓိက ပြသဿသနာက ဘုန်းကြီးတွေ ကနေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရှေးတုန်းက ဆရာတှောတွေဟာ စာတတ်ပေတတ် သာမက၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေကို သင်ကြားပေးရသူတွေ ဖြစ်လေတော့ သူတို့ဆီကနေ ပါဠိစကားလုံး အများစု ပြန့်ကုန်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ မေတဿတာတို့ သစဿစာတို့ စတာတွေဟာ ပါဠိကနေ ယူထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားလုံးတွေကို ပါဠိလို့ မမြင်သင့်ပါဘူး။ မြန်မာစာလို့ပဲ သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မေတဿတာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတစ်ယောက်က ဘာကိုမှ ရှင်းပြစရာမလိုပဲ အလိုလို နားလည်နိုင်တဲ့ အနေအထား ရောက်ပြီး ဖြစ်နေလို့ပါ။
အဂဿငလိပ် ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မြင်တာနဲ့ English ဆိုတာကို သိတယ်။ တကယ်တမ်း ဒီစကားလုံးကို တိတိကျကျ မြန်မာအသံထွက် ရေးဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုနက ရေးထားတဲ့ အဂဿငလိပ် ဆိုတာဟာ မြန်မာက တိုက်ရိုက် မွေးစားလိုက်ပြီး မြန်မာမှု ပြုထားတဲ့ စကားလုံးပါပဲ။ ဟိုးတစ်ခါက ပြောခဲ့သလို ပါဠိမှာ ဆကဿကဂံဆိုတာကို မြန်မာတွေက ဆဋဿဌဂံဆိုပြီး စာလုံးအသစ် မွေးစား မြန်မာမှု ပြုလိုက်သလိုပါပဲ။ ဆိုတော့ ကျွန်တှောတို့ အခုသုံးနေကြတဲ့ အဲဒီလို ပါဠိသက်၊ အဂဿငလိပ်သက် စကားလုံးတွေကို မူရင်း ပါဠိ၊ အဂဿငလိပ် စတာတွေနဲ့ သွားသွား မနှိုင်းယှဉ်ရင် ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်း ဒါမျိုးက Etomology လို့ခှေါတဲ့ ဘာသာစကား ရင်းမြစ်ကို စူးစမ်းလေ့လာတဲ့ အခါမှသာ နှိုင်းယှဉ် သင့်ပါတယ်။ ခုနက သရသံ ဩ အတွက် မြန်မာစာလုံး (အော)(သဝေထိုး+ရေးချ) ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ (ဪ)အတွက် (အှော) (သဝေထိုး+ရေးချ+ရှေ့ထိုး) ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ (ဣ)အတွက် (အိ)(လုံးကြီးတင်) ရှိပါတယ်။ (ဤ)အတွက် (အီ)(လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်) အသံရှိတယ်။ (ဦ)အသံအတွက် (အူ) (နှစ်ချောင်းငင်) ရှိပါတယ်။
ဒီယူနီကုဒ် စနစ်မှာ ဩ၊ ဪ၊ ဥ၊ ဦ စတာတွေကို သရနေရာမှာ ထည့်ထားတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစဿစပါ။ တကယ်တမ်း အဲဒီနေရာမှာ ထည့်သင့်တာ အခုနလို သရသံရအောင် ဖွဲ့ထားတဲ့ စာလုံး အတွဲတွေပါ။ ကျွန်တှောသာ ဆိုရင် အဲဒီနေရာတွေမှာ (ရေးချ) (လုံးကြီးတင်) (လုံးကြီးတင်ဆံခတ်) (တစ်ချောင်းငင်) (နှစ်ချောင်းငင်) (သဝေထိုး) (နောက်ပစ်) စတာတွေကို ထည့်မှာပဲ။ အခုန စာလုံးတွေကို မထည့်ဘူးတော့ မဟုတ်ဘူး ထည့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ၍၊ ဤ၊၌ အဲဒီလို စကားလုံးတွေလို ပိုတဲ့ နေရာမှာမှ ထည့်မယ်။ အခုတော့ ဘာမှ အသုံးမဝင်လှတဲ့ စာလုံးတွေကို အဓိက ထားပြီး ထည့်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ရယ်ရတာက ဥ၊ ဦ ကိုတော့ ထည့်ထားပြီး (ဦး)ကိုကျတော့ ချန်ထားခဲ့ ပြန်ပါတယ်။ ဝစဿစနှစ်လုံးပေါက်ပါလို့ (diacritic) အနေနဲ့ ချန်ခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့။ သရသံအတွဲမှာ ဒါမျိုး ခွဲမရဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား မသိဘူး။
နောက်ထပ်တစ်ခု လုံးဝ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိတာက အခုချိန်အထိ ရှေ့ထိုးနဲ့ အသတ်ကို မခွဲခြားသေးတာပါ။ ရှေ့ထိုးနဲ့ အသတ်ဟာ ဘယ်လိုမှ မတူပါဘူး။ တကယ်တမ်းဆို ရှေ့ထိုးဟာ သရသံ (အှော)ကို ဖွဲ့စည်းရာမှာပါတဲ့ အတွဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့တန်ဖိုးဟာ အသတ်(Killer) ထက်များရပါမယ်။ အဲဒီ နှစ်ခုဟာ ကွဲပြားရပါမယ်။ အခုတော့ ရောချထားတဲ့အတွက် (အှော)သရသံလား၊ အသတ်လားဆိုတာ ရောထွေး နေပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ တဆက်တည်းက ပင့်ရစ်ဆွဲထိုး ကိစဿစပါ။ ဒီအချိန်အထိ ပင့်ရစ်ဆွဲထိုးကို လုပ်မပေးသေးဘဲ ချန်ထားတယ်။ သီအိုရီအရ ယပင့်သည် ယပက်လက်က ပင့်ထားတာ။ ရရစ်သည် ရကောက်က ရစ်ထားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို မြန်မာတွေက ယပင့် ရရစ် အစရှိတာတွေနဲ့ အစားထိုး မြန်မာမှု ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပင့်ရစ်ဆွဲထိုးက မြန်မာ့မူ စစ်စစ် ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တှောတို့ ထောက်ပြသင့်တယ်။
နောက်တစ်ခု ကျန်သေးတယ်။ သဝေထိုးကို ဗျည်းနောက် ပို့ထားတဲ့ ကိစဿစ။ သူ့ဘာသာ ပါဠိက သဝေထိုး နောက်မှာ သိမ်းတာ ကျွန်တှောတို့ မြန်မာစာက လိုက်သိမ်းစရာ မလိုပါဘူး။ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ သဝေထိုးက ဗျည်းရှေ့ရောက်နေရင် စာလုံးစီတာ၊ စဉ်တာ၊ ဖြတ်တာ တွေမှာ ခေါင်းတှောတှော စားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အလွယ်လိုက်တဲ့ အနေနဲ့ နောက်ထားလိုက်တယ် ဆိုရင်တော့ တူနဲ့ ထုသေဖို့သာ ကောင်းတော့တယ်။
ဆိုတော့ကာ ကိုယ့်မြန်မာစာ စနစ်ကို သူများက လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေတာကို ဒီအတိုင်း ဘာမှမပြောဘဲ လက်ခံရမယ် ဆိုတာတော့ ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ခုနက အချက်တွေကို ကျွန်တှောတို့ ကန့်ကွက်ရမှာပါ။ တရားဝင်ကို ကန့်ကွက်ရမယ်။ ခြေခြေမြစ်မြစ် ရှိတဲ့ အဆင့်မီ စာတမ်းတွေ တင်ရမယ်။ သက်သေ အထောက်အထား အစုံအလင်နဲ့ ပြရမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ့်နွားကို သူများက တက်မောင်းသလို ဖြစ်နေတော့မှာပေါ့။ ကျွန်တှောကတော့ အထက်က အချက်တွေနဲ့တင် ဒီစနစ်ကို လုံးဝ မထောက်ခံဘူး။ မြန်မာပြည်က NLP နဲ့ အခြားပညာရှင် တွေကလည်း ဘာကြောင့်မို့ လက်ခံထားတယ် ဆိုတာ နားမလည်နိုင်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ဘဲ လူညီလို့ ဤကို ကျွဲ ဖတ်ကြတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြရင်လည်း ကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်၊ မသိနားမလည်တဲ့ ပြည်သူတွေကိုပါ ဆွဲခှေါတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီစနစ်တွေသာ မပြင်ဆင်ခဲ့ရင်တော့ ဒီယူနီကုဒ် ကွန်ဆိုတီယမ်ကို ကျွန်တှောတို့ ဆနဿဒပြသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ဘယ်သူ့ကုဒ်ကဖြင့် မှန်တယ်၊ ဘယ်သူကတော့ အမှား လုပ်နေမယ့်အစား အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တိုင်းပြည်က ဘာမှနားမလည်တဲ့ enduser တွေ အကျိုးကို ရှေ့ထားပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါပြီ။ အဲဒီ ယူနီကုဒ် ကွန်ဆိုတီယမ်က ပြဋဿဌာန်းထားတဲ့ လက်ရှိ တန်ဖိုးတွေကို အခြေပြု တီထွင်ထားတဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ် အားလုံးလည်း အထက်က အချက်တွေကို သေသေချာချာ ပြောင်းလဲ စဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ အမှားကြီးကို အတည်လုပ်မယ် ဘာဖြစ်လဲ ဆိုရင်တော့ လိုက်အားပေး သုံးနေမယ့်အစား ကျွန်တှောကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ Third Party Software ရေးပြီး သီးခြားသုံးစွဲတာကမှ မြန်မာစာကို ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်တယ်လို့ ထင်မိပါတော့တယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပိုစ့်မှာ မှားနေတဲ့ အချက်ရှိရင် မြန်မာဘာသာ၊ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များမှ အကိုးအကားနဲ့ ညွှန်ပြပေးစေလိုပါသည်။
Posted by NLS at 10/30/2007 02:24:00 PM 1 comment Links to this post
မနဿတလေးသွား မြို့လား (၁)
ဒီတခေါက် မနဿတလေး ခရီးသွားရတာ စိတ်လက် ပေါ့ပါးတယ်။ ဘာလုပ်မယ်ရယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတာ ကြီးကြီးမားမား မရှိခဲ့ဘူး။ သူငယ်ချင်းရဲ့ ညီမ စေ့စပ်ပွဲ သွားတက်မယ်ဆိုပြီး အဝတ် သုံးစုံလောက် ဆွဲထည့်ရင်း ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အမြတ် ထွက်အောင်တော့ မနဿတလေး တဝိုက်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေရဲ့ ကနုတ်တွေ ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်မယ်ပေါ့။ အဆင်ပြေရင်လည်း ပုဂံကူးမယ်ပေါ့။ ပိုက်ဆံလေး ပိုလျှံ နေသေးရင်လည်း ပုပဿပါးသွားမယ်ပေါ့။ စိတ်ကူးနဲ့ အခြေအနေပှေါ မူတည်ပြီး အဆင်ပြေသလို လုပ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်ခဲ့တာ။
တကယ်တော့ ကားနဲ့ ခရီးသွားရတာ ပင်ပန်းတယ်။ ကျွန်တှောက ဘယ်ဘက် အာရုံကြောမှာ ဒဏ်ရှိတဲ့သူဆိုတော့ တနေရာထဲမှာ ကြာကြာ မထိုင်နိုင်ဘူး။ ကားခုံတွေကလည်း သိတဲ့အတိုင်း လှုပ်မရ ပြုမရနဲ့ ဒူးတောင် မလွတ်ချင်ဘူး။ ၂နာရီလောက် ထိုင်မိရင် ဘယ်ဘက် ခေါင်းကနေစပြီး ညာဘက် ခြေဖျားအထိ တလျောက်လုံး ညောင်းလာတယ်။ ဒီခံစားချက်ကို တှောတှော စိတ်ပျက်တယ်။ နာတာလည်းမဟုတ်၊ ကျင်တာလည်း မဟုတ်၊ ညောင်းနေတာ။ ဆေးအခှေါ Stiffness လို့ ပြောရမလားမသိဘူး။ ဒါကြောင့် ခရီးဝေး သွားရမယ်ဆိုရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခြေခင်းလက်သာ သွားရတဲ့ယာဉ်၊ ဒါမှမဟုတ် အချိန် သိပ်မပေးရတဲ့ လေယာဉ်နဲ့ပဲ သွားချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လေယာဉ်ဈေးက သိတဲ့အတိုင်း။
အညာဒေသကို ဝင်လာတာနဲ့ လေထဲမှာ အနံ့တမျိုးရတယ်။ တမာနံ့လိုလို၊ ဖုံနံ့လိုလို၊ ဆူးချုံပင်တွေကလိုလို၊ ချောင်းကော မြောင်းကောလေးတွေက လိုလို။ လမ်းတလျောက်လုံး အခြေခံလူတန်းစားတွေကို ကျွန်တှော မြင်နေရတယ်။ စိတ်မကောင်းဘူး။ တချို့က နွားတွေဖက်ပြီး လယ်ထွန်နေရတုန်းပဲ။ တချို့က ရေလွှမ်းနေတဲ့ စပါးပင်တွေကို လမ်းဘေးကနေ ငေးနေတယ်။ တချို့က ဗွက်သာသာ ချောင်းရေထဲမှာ ကူးခပ်နေတယ်။ တချို့က သနပ်ဖက် ဆေးလိပ်ကြီးတွေဖွာရင်း ဘယ်ကနေ ဘယ်ကိုမသိ နေပူပူကြီးမှာ လျှောက်သွားနေကြတယ်။ တချို့က လယ်ကန်သင်းတွေဘေးက မြောင်းသေးသေးလေးထဲကနေ ငါးဖျစ်သလဲလေးတွေကို ပက်ယူနေကြတယ်။ ကလေးငယ် တချို့က နွားတွေ ကျွဲတွေ ကျောင်းနေကြတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ဘဝတွေကို ကျွန်တှောတို့ ဘယ်လိုများ ကူညီနိုင်မလဲ။ ပညာတတ်အောင် သင်ပေးရမယ်။ ပညာတတ်ချင်လာအောင် လှုံ့ဆှောပေးရမယ်။ လက်မှုကနေ စက်မှုပြောင်းနိုင်အောင် ချေးငွေများများ ထုတ်ချေးပေးရမယ်။ ကျန်းမာရေး အသိဉာဏ်တွေ ပေးရမယ်။ နည်းပညာတွေ ပေးရမယ်။ လုပ်တော့ လုပ်နေကြတယ်လို့ သိရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ လုပ်နေတာထက် အဆပေါင်းများစွာ အရှိန်ဟုန်မြှင့်ပြီး လုပ်မှ သူတို့တွေရဲ့ လူနေမှုဘဝနဲ့ အသိဉာဏ်တွေ ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တှော ထင်တယ်။
မနဿတလေးကို ကျွန်တှောတို့ရောက်တော့ ညနေစောင်း။ သူငယ်ချင်းက မြန်မာပြည်ထုတ် ဂျစ်တစ်စင်းနဲ့ လာကြိုရှာတယ်။ သံပြားတွေကို လက်နဲ့ ရိုက်၊ ချိုး၊ ခွေ၊ ခေါက်၊ ညှပ်၊ ကပ်၊ ဆက် ထားတဲ့ အဲဒီကားတွေကို ကျွန်တှော တှောတှော စိတ်ပျက်တယ်။ စက်တွေကတော့ ကောင်းပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်ရင် ဘယ်လို ကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အစီအမံတွေ၊ ခေတ်မီ တိုင်းတာချက်တွေ ဘာတစ်ခုမှ ရှိတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ သိန်းတစ်ရာကျှော ပေးပြီး ဝယ်ရသေးတယ်။ သိန်းတစ်ရာဆိုတော့ ဒှေါလာ ဂဝဝဝလောက်ပေါ့။ ဒါတွေပြောနေရင် တခြားနိုင်ငံက လူတွေ မျက်စိပြူးကုန်မှာပဲ။ ဘာလို့များ ဒီလောက် ကားဈေးတွေ ကြီးနေရလဲလို့။ ထားပါတော့။ ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်း အိမ်ကိုအသွား ဖြုန်းကနဲ မိုးက သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာပါလေရော။ ကျွန်တှောတို့လည်း ရွှဲရွှဲစိုပေါ့။ လမ်းတွေပှေါမှာ ရေက တရိပ်ရိပ် တက်လာတယ်။ ရေနှုတ်မြောင်းတွေလည်း မတွေ့ရပြန်ဘူး။ သူ့အိမ်ရှေ့မှာကို ရေက ခြေသလုံးလောက် ရောက်နေပြီ။ စတိုင်လိုမိုင်လို လာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်သား စစ်စစ်တွေလည်း ကြွက်စုတ်တွေကို ဖြစ်လို့။
စကားမစပ် ခုနက ကျွန်တှော ရန်ကုန်သား စစ်စစ်လို့ ရေးတာ ဖတ်မိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ဒါက ရန်ကုန်လေ မဟုတ်ဘူး။ မနဿတလေးလေ။ မန်းသူ မန်းသားတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ မနဿတလေးသား၊ မနဿတလေးသူ စစ်စစ်လို့ ပြောရတာ သိပ်ပြီး အာတွေ့ လျှာတွေ့ တွေ့ကြပုံပှေါတယ်။ မနဿတလေးမှာမွေး၊ မနဿတလေးမှာနေ အဲဒီလိုမျိုး လူကိုမှ မနဿတလေးသား စစ်စစ်လို့ ကျွန်တှော့ သူငယ်ချင်း ထိပ်တင်မောင်မောင်တုတ်ခန့်က ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ပြောပြတယ်။ ကျွန်တှောက ဒီကောင့်ကို စချင်တော့ ဒီလိုဆို ဒီတသက်တော့ ငါဘယ်လိုမှ မနဿတလေးသား မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လို့ မေးလိုက်တော့၊ ဒါတော့ ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ ကိုယ်ပဲမောင် ဆိုပြီး အထက်စီးကနေ ဓနရှင်အပြုံးနဲ့ ပြောပါတယ်။ ရပါတယ်ကွာ ဒီလိုမှ မဖြစ်ရရင်လည်း မနဿတလေးသူကိုယူ၊ ကလေးလေး နှစ်ယောက်လောက် မွေးပြီး မနဿတလေးသူ၊ မနဿတလေးသား အဖေပဲ လုပ်တော့မယ်လို့ ကျွန်တှောက ပြန်ပြောတော့မှ မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ကောင်ကွာ ဆိုပြီး ဆဲဆိုနေပါတော့တယ်။ (နောက်တနေ့ ကျွန်တှောရယ်၊ ကိုရဲရယ်၊ အိုင်တီ မောင်မောင်ကြီးရယ်၊ ဆရာမ မဖြူဖြူဝင်းရယ်၊ မချောအိမာန်ရယ် ညစာစားရင်း စကားပြောဖြစ်တော့ အဲဒီ စစ်စစ်အကြောင်းက ရောက်ဖြစ်အောင် ရောက်သွားပါသေးတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ နောက်ဆုံးတော့ 300 ဇာတ်ကားထဲကလို ကျွန်တှော ရန်ကုန်သား တပ်လန်ထွက်သွားတာပေါ့။ ဟားဟား။ )
ကျွန်တှော မနဿတလေးမှာ လူတန်းစား ၂မျိုး မြင်တယ်။ တစ်မျိုးက မိရိုးဖလာ စီးပွားရေး လုပ်တဲ့သူ၊ နောက်တစ်မျိုးက ခေတ်မီ စီးပွားရေး လုပ်တဲ့သူ။ လူထုစိန်ဝင်း ပြောသလို မနဿတလေးဟာ မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်းထက် သူ့ကျွန်ဖြစ်တာ နောက်ကျခဲ့လေတော့ မြန်မာမှု အငွေ့အသက်တွေက အဲဒီမှာ ပိုကျန်နေသေးတာပေါ့။ မနဿတလေးမှာ ခေတ်မီ စီးပွားရေးသမား အများစုက စိန တိုင်းသားတွေပဲ။ သူတို့က အမြဲ နိုင်ငံခြား ရုပ်သံလိုင်းတွေကို ကြည့်တယ်၊ မဂဿဂဇင်းတွေ ဖတ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ပိုင်တဲ့ ဆိုင်တွေဆိုရင် အခင်းအကျင်း၊ အပြင်အဆင်တွေက တှောတှော ခေတ်မီတယ်။ ရန်ကုန်ထက်ကို သာတယ်လို့ ကျွန်တှော ထင်တယ်။ စားသုံးသူလည်း မပြတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘာလို့ မနဿတလေးရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ရန်ကုန်လို အဆက်မပြတ် တိုးတက်မှု ဖြစ်မလာရတာလဲ။
အပိုင်း ၁ ပြီး၏။
Posted by NLS at 10/23/2007 11:54:00 AM 1 comment Links to this post
Labels: Mandalay, Travel
Logos for Zawgyi Font
Zawgyi Font Logos, Set (1)
ပျင်းလို့ဗျာ။ စိတ်လမ်း ရှုပ်ရှုပ် ရှိတာနဲ့ အဲဒီအကောင်လေးတွေ ထိုင်လုပ်နေမိတယ်။ သမရိုးကျ ဖောင့်ဒေါင်းလုဒ် ပုံတွေကို မသုံးချင်လို့ တစ်ပုံ လုပ်ရင်းက ဆက်လုပ် ဖြစ်သွားတာ။ ဆနဿဒရှိရင် စီးပွားရေး မဟုတ်တဲ့ ကိစဿစတွေမှာ လွတ်လပ်စွာ ယူသုံးလို့ ရပါတယ်။ ဘာခွင့်ပြုချက်မှ မလိုပါဘူး။ အင်တာနက် အခက်အခဲနဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အကုန် တင်မပေးနိုင်သေးဘူးဗျာ။ နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့။ လိုချင်တဲ့ ပုံလေးတွေ ရှိရင်လည်း အကြံပေးလို့ ရပါတယ်။
Tags: Logo, Zawgyi Font, Nyi Lynn Seck
Posted by NLS at 9/24/2007 03:28:00 PM 1 comment Links to this post
Labels: Logo, My Designs, Zawgyi
Wanna see my poor face?
ကျွန်တှော့ကို လမ်းမှာတွေ့ရင် ရှောင်လို့ရအောင် အမိုက်ဆုံး၊ အလှဆုံးပုံ တင်လိုက်တယ်။ ဘဝပေး ကံလေးက မကောင်းလေတော့ မျက်နှာပြင်မှာ မဆင်မခြင် ပေါက်နေရရှာတဲ့ ဝက်ခြံလေးတွေကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ဗျာ။ အို ရုပ်က အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ထားကောင်းဖို့ အဓိကပါ။ မဟုတ်ဘူးလား။ အားမငယ်ဘူး။ အားမငယ်ဘူး။ ရုပ်မလှလည်း ဘုရားပေးသလောက်ပေါ့ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ အရင်ဘဝက စိတ်ယုတ်မာတွေ ထားခဲ့မိလို့ မျက်နှာပြင်မှာ လာထင်တယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒါတောင်ဒါက လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးလလောက်ကပုံ။ အပူအတှော ငြိမ်းနေစဉ်က ပုံပေါ့။ အခုတော့ ဒိထက်ဆိုး။ လူရှေ့မှာ ဘီယာခွက် တွေ့ကြမှာပေါ့။ အသောက်အစားကလည်း ဖက်လိုက်သေးတယ်။ ဪ ဘဝဘဝ လှတပတလေးတွေများမြင်ရင် ဝမ်းတော့နည်းမိသားဗျာ။
Posted by NLS at 9/19/2007 06:38:00 PM 1 comment Links to this post
ယုဒသန် ကမဿမဝါစင်တာ မနဿတလေးမှာ မှားဖွင့်ထားခြင်း
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ကျွန်တှောစာအုပ် တစ်အုပ် ဖတ်ပါတယ်။ မနဿတလေးက မြန်မာစာနဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ရသူ ဒေါက်တာ ဖြူဖြူဝင်းရဲ့ ယုဒသန်ကမဿမဝါစင်တာ မနဿတလေးမှာ ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ။ စာအုပ်ကို စဖတ်မိကတည်းက တခုခု လွဲနေမှန်းတော့သိတယ်။ ဘာလွဲနေတယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဂူဂယ်လ်က စာအုပ်တွေ ရလိုက်တော့မှ အဲဒီအချက်ကို သွားတွေ့ပါတယ်။
ပထမဆောင်းပါးက အဂဿငလိပ် မြန်မာ ပထမဆုံး အဘိဓာန်ကို ပြုစုသူဟာ မကဿခရာ မင်းသားကြီး မဟုတ်ဘဲ အဂဿငလိပ် ကုန်သည်ကြီး ချား(စ်)လိန်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မကဿခရာ မင်းသားကြီးက မြန်မာစာတည်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ဒါကတော့ စဉ်းစားတတ်သူတိုင်း သိတဲ့ ကိစဿစပါ။ တည်ပုဒ်နဲ့ မြန်မာပြန်အကြမ်းကို လိန်း(စ်)ကထုတ်၊ မင်းသားကြီးက မြန်မာလိုအသုံး မှန်မမှန်စစ်ပေး ဒီလောက်ပါပဲ။ ချားလိန်း(စ်)က ကုန်သည်၊ မင်းသားကြီးကလည်း ဒါတွေကို စိတ်ဝင်စား၊ စိတ်အားထက်သန်မှုပဲရှိတာ၊ အတွေ့အကြုံ မရှိလို့ သူတို့ အဘိဓာန်ဟာ ယုဒသန်လို စနစ်တကျ မရှိပါဘူး။ မြန်မာလို စာလုံးပေါင်း အမှားတွေဆိုတာလည်း အများကြီးပါပဲ။ ရွှေနန်းတှောတွင်းမှာ ဉ (ညကလေး၊ ညဦးခေါင်းမဲ့)ကို ကျက်သရေ မရှိဘူးဆိုပြီး မသုံးလို့ အဲဒီစာလုံးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာလုံးတွေအားလုံးမှာ (ည)ကို အစားထိုး သုံးထားတာကို တွေ့ရတာကြောင့် မကဿခရာမင်းသားကြီး တည်းဖြတ်တယ် ဆိုတာလည်း ပှေါလွင်လှပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ တဆက်တည်း ဒုတိယ ဆောင်းပါးက ပထမဆုံး အဂဿငလိပ် မြန်မာ အဘိဓာန်ဟာ G.H.Hough ရဲ့ အဘိဓာန်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဆောင်းပါလေးပါ။ ဟောင်းဟာ သူ့ရဲ့ စာအုပ်ကို ၁၈၂၅ ဧပြီလမှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ လိန်းရဲ့ အဘိဓာန်က ၁၈၄၁မို့ အများကြီး ကွာတယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအယူအဆဟာ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ကျွန်တှော စဉ်းစားကြည့်တယ်။
ဟောင်းဟာ သူ့ရဲ့ စာအုပ်ကို An English and Burman Vocabulary လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ လိန်း(စ်)ကတော့ Dictionary, English and Burmese လို့ပေးထားပါတယ်။ ဘာလို့သူဟာ သူ့စာအုပ်ကို အဘိဓာန်(Dictionary)လို့ မပေးခဲ့လည်းဆိုတာ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်ပါ။ အဘိဓာန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ရှိပါတယ်။ ပြည့်စုံတဲ့ အဘိဓာန် တစ်စောင်မှာ ပါဝင်ရမယ့် အချက်ကြီး ငါးချက် ရှိတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ တည်ပုဒ်၊ အသံထွက်၊ ဗျုပဿပတ်၊ သဒဿဒါနဲ့ အဓိပဿပာယ် ဖြစ်ပါသတဲ့။ ဟောင်းရဲ့ စာအုပ်ဟာ အဲဒီအချက်တွေထဲမှာ အချက် သုံးချက်နဲ့သာ ကိုက်ညီပါတယ်။ ဟောင်းဟာ သူ့စာအုပ်မှာ အဂဿငလိပ် တည်ပုဒ်ကိုပေးတယ်။ ပြီးရင် မြန်မာအသံထွက်ကို အဂဿငလိပ်လို ရေးပြတယ်။ အဲဒါပြီးမှ မြန်မာစကားလုံးကို ပြပါတယ်။ တည်ပုဒ်တွေမှာလည်း နာမ်နဲ့ ကြိယာတွေကိုသာ အများဆုံး ထုတ်နှုတ်သုံးသွားပါတယ်။ စာလုံးတိုင်းအတွက် သဒဿဒါခွဲမပြထားဘူး။ ဗျုပဿပတ်မပါဘူး။ ဥပမာ ဥပမေယျ မထားဘူး။ အရိုးရှင်းဆုံး စကားလုံး ဘာသာပြန်ကိုသာ ပေးထားပါတယ်။ အနက်တူ အသုံးကွဲ စကားလုံးတွေလည်း မပြထားပါဘူး။ သူ့စာအုပ်ဟာ အဂဿငလိပ်တွေကို မြန်မာစာ နားလည်အောင် ပြုစုထားတဲ့ စာအုပ်မို့လို့ တည်ပုဒ်ကို အသံထွက်ရာမှာ မူရင်း အဂဿငလိပ် အသံထွက်ကို မပြဘဲ မြန်မာအသံထွက်ကို အဂဿငလိပ်လို ရေးပြတာကလည်း အဘိဓာန် အဂဿငါရပ်နဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဟောင်းဟာ သူ့စာအုပ်ကို အဘိဓာန်လို့ နာမည် မတပ်ဘဲ အဂဿငလိပ်-မြန်မာ စကားလုံးများလို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သူကိုယ်တိုင်တောင် အဘိဓာန်လို့ မသတ်မှတ်တဲ့ စာအုပ်ကို ကျွန်တှောတို့က အဘိဓာန်လို့ သတ်မှတ်ဖို့ မလိုဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဟောင်းရဲ့ စာအုပ်မှာ စကားလုံးသက်သက် စာမျက်နှာ စုစုပေါင်း ၄၂၄မျက်နှာ ပါပါတယ်။ ဆရာမပြောတဲ့ စာမျက်နှာ ၂ဝဝကျှောဆိုတာနဲ့ လွဲနေလို့ စာအုပ်များ မှားနေသလားဆိုပြီး တိုက်ဆိုင်ကြည့်ဖို့ရာ ဟောင်းရဲ့ စာအုပ်နာမည်ကို ဖှောပြထားတာ မတွေ့မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၁၈၂၅မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တယ် ဆိုတာကြောင့် ဒီစာအုပ်ကိုပဲ ဦးတည်ညွှန်းဆိုတယ်လို့ မှတ်ယူမိပါတယ်။
လိန်း(စ်)ရဲ့ အဘိဓာန်ကရော အဲဒါတွေ အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတာ စစ်ကြည့်ပါတယ်။ မကိုက်ညီပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လိန်း(စ်)ရဲ့ စာအုပ်ဟာ အဘိဓာန်ဝိနည်း တှောတှောများများကို အခြေခံထားတာတော့ တွေ့ရပါတယ်။ အိတ်ဆောင် အဘိဓာန်၊ အကျဉ်းချုပ် အနေထားလောက် လက်ခံလို့ ရပါတယ်။ လိန်း(စ်)ဟာ ပထမ တည်ပုဒ်ကို ပြတယ်။ ပြီးရင် သဒဿဒါကို ဖှောပြတယ်။ နောက်ဆုံး အနက်တူ အသုံးကွဲ အဓိပဿပာယ် အားလုံးကို ပြပေးထားပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွင့်ကိုလည်း အဂဿငလိပ်လို ပြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အသံထွက်၊ ဥပမာတွေ မပါပေမယ့် စနစ်ကျတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ဟောင်းရဲ့ စာအုပ် အဖွင့်မှာ ဒီစာအုပ်ဟာ အခြေအနေအရ လိုအပ်လို့ ပြုစုထားတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျဒ်ဆင်က ပိုမိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဟာ ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း ပါရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဂျဒ်ဆင် ထုတ်တော့လည်း အဘိဓာန်ဆိုတဲ့ နာမည်တပ်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြုစုနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဟောင်းရဲ့ စာအုပ်ဟာ ဆရာမပြောသလို အဘိဓာန် မဟုတ်ပါဘူး။ စကားလုံးစုစည်းမှု စာအုပ်သာ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူမိပါတယ်။ ၁၈၄၅မှာ ဟောင်းရဲ့ Anglo-Burman Dictionary ဆိုတဲ့ စာအုပ်နဲ့ ဆရာမ ပထမထားချင်တဲ့ စာအုပ်ကို နှိုင်းယှဉ် ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဟာကသာ အဘိဓာန် ပိုပီသလဲဆိုတာ သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သူကိုယ်တိုင် သူ့စာအုပ်ကို ဘာလို့ အဘိဓာန်လို့ နာမည်ပေးတယ် ဆိုတာကိုလည်း သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဘိဓာန်နည်းစနစ်နဲ့ ပိုမို ကိုက်ညီမှုရှိပြီး ပိုလည်း ပြည့်စုံတဲ့ ၁၈၄၁ထုတ် ချား(စ်)လိန်းနဲ့ မကဿခရာမင်းသားကြီးတို့ရဲ့ အဘိဓာန်ကသာ ပထမဆုံး အဂဿငလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်လို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ အပြည့်စုံဆုံးကို ပြောပါဆိုရင်တော့ ယုဒသန်ရဲ့ အဘိဓာန်ကိုသာ ပထမအနေနဲ့ သတ်မှတ်သင့်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွေ အပြင်မှာ မရှိတော့ရင် ဂူဂယ်လ်ကနေ ဒေါင်းလုဒ် ပေးထားပါတယ်။ တိုက်ဆိုင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ယုဒသန်ကမဿမဝါစင်တာ မနဿတလေးမှာ၊ ဆောင်းပါး ၁၊ ၂၊ ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်း (မြန်မာစာ)။ ထီးပေါင်းကား စာအုပ်တိုက်။
A Dictionary, English and Burmese, Charles Lane, 1841, Ostell and Lepage
A Dictionary, English and Burmese, Judson, 1849, ABM
An English and Burman Vocabulary, G.H.Hough, 1825, Serampore
Anglo-Burman Dictionary, G.H.Hough, 1845, ABM
အတွေ့အကြုံ၊ အဆုံအမြင်နှင့် အတွေးအမြင်။ ဒေါက်တာလှဘေ။ ဒေါင်းစာပေ။
Tags: Myanmar, Dictionary, Book Review
Posted by NLS at 9/18/2007 02:41:00 PM0comments Links to this post
Labels: Book Review, Dictionary, Mandalay, Myanmar
မင်းက ဂျက်လန်ဒန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်။
ခေတ်ပျက်သူဌေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ ဂြိုဟ်သားပဲ ဖြစ်ဖြစ်။
“ဟေ့လူ” လို့ပဲ အပြန်အလှန်ခှေါကြ။
လူကွဲသွားရင် လှမ်းခှေါလိုက်ပေါ့ “ဟေ့လူ”….။
ငါတို့ “ဟေ့လူ” နှစ်ယောက် ခုတ်ပိုင်း ခွဲဝေကြ။
“ဟေ့လူ” တွေပေါက်ကွဲနေကြတယ်… ပေါ့။
ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ကစားပွဲကို ထမ်းလို့။
ပုခုံးဖက် ကခုန်ခဲ့ဖူးသမျှ နွေးထွေးလက်တွေ
ပြန်လည် အေးစက် ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြ။
သတဿတုမိုးများ၊ နှင်းဆီတရာ၊ ကလောမြို့
ကျွန်တှော သိပ်ကြိုက်တဲ့ ကိုနိုင်မွန်အောင်သွင်ရဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ခင်ဗျားတို့လည်း ကျွန်တှော့ကို အခြားနေရာတွေမှာ တွေ့တဲ့အခါ ဟေ့လူလို့ ခှေါကြပါ။ ပြီးရင် အဲဒီအရာတွေ အားလုံးကို မေ့ထားလိုက်ပါတော့။ နောင်တချိန် အပြင်မှာ ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါ ကျွန်တှောကကျွန်တှော၊ ခင်ဗျားက ခင်ဗျားပေါ့။ ဟေ့လူကို ယူမလာပါနဲ့တော့။ နာမည်ဝှက် သုံးကြစတမ်းပေါ့ဗျာ။ တောမှာပြောတဲ့စကား တောမှာပျောက် ပါစေတော့။
Posted by NLS at 9/18/2007 02:31:00 PM0comments Links to this post
Burmese Ebooks Download at Google
မနေ့က လူလည်းအားနေ၊ ပျင်းပျင်းလည်း ရှိတာမို့ အင်တာနက် တှောတှောကြာအောင် သုံးဖြစ်တယ်။ အမတစ်ယောက်ရဲ့ စကားအရ ဂူဂယ်လ်ကို အချိန်ပေးပြီး မွှေလိုက်တာ လိုချင်တာတွေ ရလိုက်လို့ ပျှောလိုက်တာ အရမ်းပဲ။ ဂူဂယ်လ် စာအုပ်တွေကို ကျွန်တှော အရင်က မွှေဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါင်းလုဒ် မရခဲ့ဘူး။ မနေ့ကတော့ ရတယ်ခင်ဗျ။ ရတာမှ ကျွန်တှော လိုချင်နေတဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီးပဲ။ အဲဒီအထဲက အားလုံး စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖှောပြပေးပါမယ်။
A Dictionary of the Burman Language (1825) By Judson, 13.1 Mb
A Dictionary, English and Burmese (1849, ABM) A. Judson, 35.4 Mb
Anglo Burmese Dictionary (1845) By G.H. Hough, 26.2 Mb
Burmah & The Burmese (1853) By Kenneth R. H. Mackenzie, 7.8 Mb
Grammatical Notices of the Burmese Language (1842) By A. Judson, 1.76 Mb
အထက်က စာအုပ်တွေက လူတှောတှောများများ ကြားဖူးနေပေမယ့် မြင်ဖူးသူ တှောတှော ရှားပါတယ်။ တချို့ စာအုပ်တွေက မြန်မာပြည် စာကြည့်တိုက်တွေမှာတောင် မရှိတော့ပါဘူး (အဟောင်းတန်းကို လာရောင်းစားကြတယ်ဟု စာအုပ်ဟောင်း ရောင်းသူ တစ်ဦးက ပြောဖူး၏်)။ အဘိဓာန်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ မနဿတလေးသူ စစ်စစ်လို့ ဆိုထားတဲ့ ဒေါက်တာ ဒှေါဖြူဖြူဝင်းရဲ့ ယုဒသန်ကမဿမဝါစင်တာ မနဿတလေးမှာဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးနဲ့ အတူတွဲပြီး လေ့လာဖတ်ရှုကြရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်များကိုလည်း နောက်ပိုင်း ဖှောပြပါဦးမယ်။
ပထမဆုံး ဖှောပြထားတဲ့ ဂျဒ်ဆင်ရဲ့ စာအုပ်က ပထမဆုံး မြန်မာ-အဂဿငလိပ် အဘိဓာန်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ မကဿခရာ မင်းသားကြီးတို့ လုပ်တဲ့ အဘိဓာန်က ၁၈၄၁မှဆိုတော့ ဒီကောင်က ပိုစောတယ်။ ဒီစာအုပ်သာ ပထမဆုံး မြန်မာ-အဂဿငလိပ် အဘိဓာန်လို့ ပြောရပါမယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ဂျဒ်ဆင်က အသိအမှတ် မပြုဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အမှာစကားကို ဂျေဝိဒ်က ရေးသားတယ်။ ဂျဒ်ဆင် ပြုစုခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေကိုမှာ လိုတာတွေ ဖြည့်စွက်ပြီး ထုတ်ဝေတယ်လို့ သိရတယ်။ ဂျဒ်ဆင်ရဲ့ မြန်မာအဂဿငလိပ် အဘိဓာန်လို့ပဲ လူသိများပါတယ်။ ဘာလို့ ဂျဒ်ဆင်က အသိအမှတ် မပြုသလဲဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင် သိလာပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ စာအုပ်က ဂျဒ်ဆင်ရဲ့ အဂဿငလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ပါ။ အခုထက်ထိ အဂဿငလိပ်-မြန်မာနဲ့ မြန်မာ-အဂဿငလိပ် ကွဲကွဲပြားပြား မသိတဲ့သူ အများကြီး တွေ့ဖူးပါတယ်။ အဂဿငလိပ်-မြန်မာ ဆိုတာက တည်ပုဒ်က အဂဿငလိပ်၊ အဖွင့်က မြန်မာပြန်ပေါ့ဗျာ။ မြန်မာ-အဂဿငလိပ်ဆိုရင် တည်ပုဒ်က မြန်မာဘာသာ အဖွင့်က အဂဿငလိပ်ပေါ့။ ဒီစာအုပ်ကို ၁၈၄၉မှာ မှောလမြိုင် အမေရိကန် သာသနာပြု အသင်းတှောကနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။
တတိယ စာအုပ်ကတော့ ဆရာကြီး ယုဒသန်ကို လေးစား ယုံကြည်သူ G. H. Hough ပြုစုခဲ့တာပါ။ ၁၈၄၅မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ မှောလမြိုင်ဘက်က အဂဿငလိပ်-မြန်မာ ကျောင်းသားတွေအတွက် ရည်စူးပြီး ထုတ်ဝေခဲ့တာလို့ အဖွင့်မှာ ဆိုထားပါတယ်။ အဂဿငလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ရဲ့ ထူးခြားချက်က ကျောင်းသားတွေကို အဓိက ရည်ရွယ်ထားတာ ဖြစ်လို့ အဂဿငလိပ်စာလုံး တည်ပုဒ်တွေကို တဆက်တည်း မပြဘဲ Syllable တွေအလိုက် စကားလုံး ခွဲပြသွားတာပါ။ စာအုပ်မှာ အပိုင်း၁နဲ့ ၂ဆိုပြီး ခွဲထားပါသေးတယ်။ ဝါကျ တည်ဆောက်ပုံကိုလည်း တည်ပုဒ်နောက် မထားဘဲ သီးသန့် သင်ခန်းစာအနေနဲ့ ပြထားပါတယ်။
စတုတဿထ စာအုပ်ကိုတော့ ဗမာပြည်နဲ့ ဗမာပြည်သားများလို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ၁၈၅၃မှာ ထုတ်ဝေပါတယ်။ အဖွင့် စကားလေးကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။
IN offering the following historical and social account of Burmese policy and importance, it may be permitted me to makeafew remarks on the subject of the war now proceeding in that country. Unfortunate as any war always is, and must be, yet in contending with an unprincipled and tyrannical government like that of Burman, there isagrain of satisfaction in knowing that we thereby shake the despotie thrones of the East, and thus add something to the cause of liberty and peace. Such, too, is the only advantage ofacontention with the king of Ava. If we cannot humanize by fair means,—of course, under fair means I do not intend to comprehend many, of the so-called missionary labours, which cause more harm inashort while than all diplomatic fiddling will do in the course of years,—we must, vi et armis, carry civilisation into the country, and openly defy the custom-house of tyranny.
.… They have many admirable customs; that they are industrious; that their moral propensities are as yet undefiled; and that their country presentsafine field for the development both of commercial and agricultural interests. Now, when even the colonies in the south are overstocked, or rather crowded with persons not capable, asageneral rule, of occupyingaresponsible condition in life, there isanecessity foranew and yet old place. In Burman we have it. Under the rule of an independent sovereign, Pegu would formafine place, where our vessels could lie; and the teak of the country would make Bassein and Rangoon of great importance to our shipping interests. If Burman should be incorporated with our own dominions, why, then at least the same degree of elevation in the intellectual world would be obtained, as in Hindustan, or in Siam, where, as Neale informs us, the king reads “Pickwick" in English, and enjoys it.
In some respects the following character of the English, drawn by the Burmese themselves, is so just, that I shall hardly be wrong in submitting it to the reader: — “The English are the inhabitants ofasmall and remote island: what businesses have they to come in ships from so greatadistance to dethrone kings, and take possession of countries they have no right to? They contrive to conquer and govern the black foreigners, the people of castes, who have puny frames and no courage: they have never yet.....
ပဥဿစမတစ်အုပ်ကတော့ ယုဒသန်ရဲ့ မြန်မာသဒဿဒါ စာအုပ်ပါ။ ၁၈၄၂မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်အတွက် ၂၆နှစ်ကြာခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ရှားပါးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။
အထက်က စာအုပ်တွေလိုပဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီး ဒေါင်းလုဒ် ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ တနေကုန်အောင် အဲဒါတွေ ကူးနေမိတယ်။ သာသနာပြု မှတ်တမ်းတွေ၊ အတဿထုပဿပတဿတိတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါတွေဟာ မူပိုင်ခွင့် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အဖိုးတန် စာအုပ်တွေမို့ သူတို့က ပြည်သူပိုင် ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးစီးပွား မပါတဲ့ အသုံးပြုမှုမျိုးကို ခွင့်ပြုတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာဘွခ်စင်တာကလို ကှောပီရိုက်ဘိုင် ဘာညာသာဒကာတွေ တပ်မထားဘူးဗျ။ စကားမစပ် အဲဒီမြန်မာဘွခ်စင်တာကို ကျွန်တှော မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ကျေးဇူးတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တှောမှာ သူတို့ဆီက ရောင်းချတဲ့ အီးဘွခ်ပီဒီအဖ် တှောတှောများများ မိတ်ဆွေတချို့ ကောင်းမှုကြောင့် ရထားလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးသေးဘူး စာရွက်တစ်ရွက်တိုင်းရဲ့ အောက်ခြေမှာ Copyright@1998 Myanmar Book Centre, Thailand ဆိုတဲ့ စာလေးလည်း တွေ့လိုက်ရော အဲဒီစိတ်က ဖျတ်ကနဲကို ပျောက်သွားပါတော့တယ်။ သွားပြီး ရှာဝေဝယ်ယူ ဖတ်ရှု ကြည့်ကြပါ။ ရှေးဟောင်း ရှားပါးစာအုပ် အများကြီး ရှိပါတယ်။ အလကားတော့ မဟုတ်ဘူးမောင်။ ဒှေါလာ ရာနဲ့ချီ ပေးရတယ်။ ကျွန်တှော စဉ်းစားကြည့်တယ်။ သူတို့က ဘာကို ကှောပီရိုက် လုပ်တာလဲလို့။ ပီဒီအဖ်ကိုလား၊ မူရင်းစာအုပ်ကိုလား၊ သူတို့က မူပိုင်သူလား။ ကျွန်တှော့ အမြင်အရ အချို့စာအုပ်များဟာ ဘယ်သူ့မူပိုင်ခွင့်နဲ့မှ မပတ်သတ်တော့ပါဘူး။ ရေးသားခဲ့သူတွေကလည်း ဒါတွေကို အများအကျိုးအတွက် ရေးခဲ့တာ။ ဒါကို သူတို့က မူပိုင်ခွင့် ဘာညာကပ်ပြီး ဒှေါလာထောင်နဲ့ချီ ရောင်းစားကြတယ်။ ဒီမူရင်း စာအုပ်တွေကို စာပြန်ရိုက် သေသေသပ်သပ်လုပ်ပြီး ဒီလိုလုပ် ရောင်းစားရင် ကျွန်တှော မပြောလိုပါဘူး။ အခုဟာကတော့ နိုင်ငံတကာ စကှောလာတွေနဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေကို ဂုတ်သွေးစုပ်ရာ ကျပါတယ်။ ရှက်ဖို့တောင် ကောင်းတယ်။ ထပ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ဒီလောက် ရှားပါး အဖိုးတန်တဲ့ စာအုပ်တွေကို သူတို့ ဘယ်ကနေ ရသလဲလို့။ (တီ..တီ…တီ… ဟဲလို… ဟုတ်ကဲ့… ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ… ဟဲဟဲ ရေးတုန်းတန်းလန်းကြီး…. ခင်ဗျာ.. ဪဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့…..ဪ.. ဘယ်ကနေ ရသလဲဆိုတာ ရောက်သွားပြီ.. ခင်ဗျာ… ဟုတ်.. ကျွန်တှောလည်း မသိဘူးဗျ.. အဓိကကတော့ ကျွန်တှောသာဆို ဟာဒ်ကာဗာသာ ရောင်းစားချင် ရောင်းစားမယ်.. ဒီလို ကှောပီရိုက်တွေတပ်ပြီး ရောင်းမစားဘူး ရှက်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ.. ဟုတ်ပါ့ဗျာ…. ဪဒါလား လွယ်လွယ်လေးပါ.. ဒီစာသားဖျောက်တာလား… ဟိုဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးသုံးလိုက်.. ဟုတ်ဟုတ်.. ထိုင်းရောက်ရင် ပြောလိုက်စမ်းပါဗျာ.. မသိတဲ့သူတွေကသာ လေးစားမယ်.. သိတဲ့သူတွေက ချဉ်နေတယ်လို့… ဪ.. ဟုတ်.. ဒါပဲနှော.. ဘိုင်) တှောပြီဗျာ ရေးရင်းဘာတွေ ရောက်သွားတယ် မသိတော့ဘူး။
အခုန ဂူဂယ်လ်က ပေးထားတာ အဲဒီလို ရောင်းစားခံနေရတဲ့ အဖိုးတန် စာအုပ်တွေပေါ့ဗျာ။ ဒီစာအုပ်တွေအပြင် အခြားအများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီစာအုပ်တွေမှာ ဂူဂယ်လ်က ဒီစာသားလေးတွေ တပ်ထားပါတယ်။ အပှေါပိုဒ်က ရောင်းစားခံရတဲ့ စာအုပ်တွေမှာပါတဲ့ ကှောပီရိုက်ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. We also ask that you:
Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access toalarge amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them findadditional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believeabook is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whetherabook is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume thatabook’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.
ဒီလိုစာအုပ်တွေ ဒေါင်းလုဒ်ရနေပြီ၊ သူများကိုလည်း ပြောပြပေးပါဆိုတဲ့ အမ မလှလှဌေးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ။ စက်ကနေ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချဖို့ အစဉ်မပြေတဲ့သူတွေ၊ စုဆောင်းချင်တဲ့ ပညာသည်တွေ ကျွန်တှော့ဆီမှာ ကူးပြီးသား လာယူနိုင်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် မပါတဲ့ Thumb Drive လေးသာ ယူလာခဲ့ပါ။ ဝါသနာလည်းမပါ၊ စိတ်လည်း မဝင်စားဘဲ အလကားရရင် ယူမယ်ဆိုတဲ့သူတွေ မလာပါနဲ့။ ကျွန်တှော အချိန်ကုန်တယ်။ အင်တာနက် အဆင်ပြေသူတွေက ဒီနေရာမှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Keywords: Judson, Burmese Language, Burmese Dictionary
Tags: Myanmar Ebooks, Google Books
Posted by NLS at 9/14/2007 02:37:00 PM0comments Links to this post
Labels: Download, Ebooks, Myanmar
ကျွန်တှော့ရဲ့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ရင်း ကြည်သာနေတဲ့ စိတ်ဟာ အကြောင်း တစုံတရာကြောင့် ညစ်ညူးသွား ခဲ့ရတယ်။ လူဟာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်စဉ်းစားကြရင် ကောင်းလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်များ သူများကိစဿစ လိုက်စွက်ဖက် စပ်စု ပါဝင်ပတ်သတ်ချင်ကြတယ် မသိဘူး။ ကျွန်တှောဟာ တချိန်က အတိတ်တွေကို တန်ဖိုးထား တမ်းတတတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ လက်ရှိဘဝကိုပဲ ဂရုထားတော့တယ်။ အရင်ကဆို ကျွန်တှောဟာ မဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ၊ မကျေမနပ် ဖြစ်နေရခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ဖို့ကိုပဲ ဦးတည်လိုက်တယ်။
ကျွန်တှော့အတွက် အောင်မြင်ကျှောကြားမှု မလိုချင်ဘူး။ အဲဒါဟာ ကျွန်တှော့ရဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းကို ပိတ်ပင်တားဆီးရာ အနှောက်အယှက် တစ်ခုပဲလို့ ကျွန်တှောထင်တယ်။ ကျွန်တှောဟာ သာမန်လူသား တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။ မကောင်းမှု လုပ်စရာရှိရင် သာမန်လူသား တစ်ယောက်လိုပဲ လုပ်မယ်။ အခြားသူတွေအတွက် Ideal တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တှော ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မကူးခဲ့ဖူးဘူး။ အရက်သောက်ချင် သောက်မယ်၊ ဖဲရိုက်ချင် ရိုက်မယ်၊ ရှုပ်ချင်ရှုပ် ပွေချင်ပွေမယ်၊ လမ်းပှေါတက် ဆဲချင် ဆဲနေမယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တှော ပိုင်ဆိုင်ရာဘဝ ကျွန်တှော ရွေးချယ်ရာအတိုင်း ဖြစ်သွားမှာပါ။ သူများ အထင်ကြီး လေးစားတာ ခံနေရတဲ့ လူမျိုးတော့ မဖြစ်ချင်ဘူး။ ကျွန်တှော လုပ်သမျှကို လိုက်စောင့်ကြည့် ဝေဖန် နေတာမျိုးကို မလိုချင်ဘူး။ သူတစ်ပါးကိုလည်း အဲလိုမျိုး ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ဘူးသလို လုပ်ဖို့လည်း စိတ်မဝင်စားဘူး။ ဖိုရမ်က အကိုအမများက ပြောဖူးတယ် အထဲမှာ ရေးတဲ့စာနဲ့ အပြင်မှာတွေ့တဲ့ရုပ် မလိုက်ဖက်ဆုံး အထဲမှာ မင်းက ပထမတဲ့။ သူတို့ အဲလိုပြောချိန်မှာ ကျွန်တှောက ဘောင်းဘီတိုနဲ့ တီရှပ်နဲ့၊ ဆံပင်က အရှည်နဲ့။ ကျွန်တှောဟာ မြန်မာဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်နိုးပေမယ့် ပုဆိုးဝတ်မှ၊ စတိုင်ပန် ဝတ်မှ ခန့်ညားတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုတော့ လက်မခံနိုင်သေးဘူး။ ကျွန်တှော ပုဆိုးဝတ်တာမြင်ရင် ကျွန်တှော့သူငယ်ချင်းများ အထူးအဆန်း ကြည့်ကြတယ်။ ဝတ်ခဲလွန်းလို့။ ကျွန်တှောက အပျင်းထူတယ်။ ပုဆိုးက ခဏခဏ ပြင်ဝတ်ရတယ်။ အဲဒါကို သည်းမခံနိုင်ဘူး။ ဘောင်းဘီတိုက ပေါ့ပါးတယ်။ လွတ်လပ်တယ်၊ ခြေထောက်အေးတယ်။ ဒါကြောင့် ပုဆိုးထက် ဘောင်းဘီတို ပိုကြိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတပါးက မလေးစားဘူးဆိုလည်း ကိစဿစမရှိ။
ကိစဿစရှိတာက သောက်တင်းပြောတတ်တဲ့ သူတွေရယ်၊ ကိုယ့်အရေးမဟုတ်ဘဲ သူများကိစဿစ ဝင်ပါချင် သူတွေရယ်၊ အလိုက်ကမ်းဆိုး မသိသူတွေရယ်၊ ကိုယ်လိုချင်တာကိုပဲ ကြည့်တတ်သူတွေရယ်၊ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ဟာ ဘယ်လောက်အထိ သူများ ဒုကဿခရောက်တယ်ဆိုတာ မသိသူတွေရယ်၊ ဒီဘက်ကစကားကို နားထောင်ပြီး ဟိုဘက်မှာ သွားပြောတတ်သူတွေရယ်၊ အခြေအနေ အခက်အခဲကို နားမလည်တတ် သူတွေရယ် အဲဒါတွေကို အမုန်းဆုံးပဲ။ နောက်ထပ် အမုန်းစာရင်းတွေ ရှိသေးတယ်။ ဟန်းဖုန်းကို သေအောင် မုန်းတယ်။ မက်ဆေ့ပါ ပို့လို့ရတဲ့ ဂျီအက်စ်အမ်ဆို ပိုမုန်းသေးတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တှော့ကို ဓာတ်ပုံလာရိုက်ရင်လည်း လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ မကြိုက်တာက အကြောင်းရှိတယ်။ လူတစ်ယောက် ကြိုက်မှန်းမသိ မကြိုက်မှန်းမသိ ရိုက်ပြီး သုံးချင်တဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးကြလွန်းလို့။ မကြိုက်ဘူး။ စာအုပ်ငှားပြီး ပြန်မပေးတဲ့သူမျိုးဆိုရင် ခေါင်းကွဲအောင် ရိုက်ချင်တယ်။ စာအုပ်ကို စုတ်ပြတ်နေအောင် ကိုင်ပြီး ထောင့်စွန်းတွေ ကျိုးအောင်လုပ်တဲ့ သူမျိုးဆိုရင်တော့ အသေသတ် ပစ်ချင်တယ်။ ဉာဏ်ပိန်တဲ့ မိန်းမမျိုး ဆိုရင်လည်း စိတ်ပျက်မိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်မကြီးတဲ့လူမျိုးကိုလည်း အထင်ကို မကြီးဘူး။ ကိုယ့်ပြသဿသနာကို သူများပါကူးစက်စေသူမျိုး ဆိုရင်တော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်တယ်။ သူများအချိန်ကို မဖြုန်းတီးဘူး။ ကိုယ့်အချိန်ကို ဖြုန်းတီးသူ ဆိုရင်လည်း မကြိုက်ဘူး။ ကျွန်တှော့ကို ခြိမ်းခြောက်သလို ဟိန်းဟောက်သလို လုပ်သူမျိုး ဆိုရင်တော့ အမုန်းဆုံးပဲ။ ကျွန်တှော့ကို မှီခိုကပ်တွယ် နေသူဆိုလည်း စိတ်ညစ်တယ်။
လူတိုင်းဟာ နားလည်မှုကို အမြတ်နိုးဆုံးပဲလို ခဏခဏ ပြောကြတယ်။ ဘာကိုနားလည် နေကြတာလဲ။ ဘယ်အရာက နားလည်မှုလဲ။ ကျွန်တှောလည်း ဒီလိုပဲ ပြောတာပဲ။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တှော နားလည်မှု လိုချင်တယ်။ အဲဒီနားလည်မှုဟာ ပါးစပ်နဲ့ ပြောလို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တှော့ကြောင့် သူတပါး စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တှော အဲဒီလူနဲ့ မတွေ့ဖြစ်အောင် နေမယ်။ သူများနဲ့ စကားပြောနေတုန်း အဲဒီလူ သမ်းဝေနေတာ တွေ့ရင် ချက်ခြင်း နှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်ခွာမယ်။ လူတစ်ယောက်ဆီကနေ သူတန်ဖိုးထားတဲ့အရာ တစ်ခုကို အတင်း မတောင်းယူဘူး။ ကိုယ့်ကို အိမ်က မလိုအပ်တော့ဘူး ဆိုရင် အိမ်ပှေါက ဆင်းမယ်။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင် အရေးမကြီးတဲ့ ကိုယ့်ကိစဿစ တစ်ခုအတွက် ဖုန်းမဆက်ဘူး။ ဖုန်းဆက်ရင်လည်း လိုအပ်တာပဲ ပြောမယ်။ အချစ်အကြောင်း ကိစဿစတွေကို မကြားချင်ဘူး။ ခံစားချက် သက်သက်လို့ပဲ မှတ်ယူထားတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေပြောနေလည်း အပိုပါ။ ကျွန်တှောက ဘဝမှာ မျှောလင့်ချက် မရှိတဲ့ကောင် တစ်ကောင်ပဲ။ အမှန်ဆို ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ပြီးရင် လွယ်လွယ်ကူကူ သေလိုက်ချင်တယ်။ ၅၀-၆၀ မနေချင်ဘူး။ နောင်ဘဝကိုလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်သူတွေအတွက် မစဉ်းစားတဲ့ကောင်ပဲ။ ဆိုးသွမ်းခေါင်းမာတတ်ခဲ့သူပဲ။ မကောင်းမှုမျိုးစုံ စမ်းသပ်ဖူးသူပဲ။ ကျွန်တှောနဲ့ ပတ်သတ်သူတွေဟာ စိတ်ညစ်ရတယ်။ သူတို့ စိတ်ညစ်ရင် ကျွန်တှောက နှစ်ဆပို စိတ်ညစ်ရတယ်။ အဲဒီအတွက် အခြားသူတွေနဲ့ အရမ်းရင်းရင်းနှီးနှီး ပတ်သတ်ရမှာ ကျွန်တှော ကြောက်တယ်။ ကျွန်တှောဟာ Isolation ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကျွန်တှော့ဘာသာ ကျွန်တှော ဒီလို ဖြစ်နေတာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မထိခိုက်ဘူး ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တှော့ကို ကယ်တင်ဖို့ ကုစားပေးဖို့လည်း လာမပြော၊ မကူညီကြပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တှောက ဒီမကောင်းမှုမှာ ပျှောဝင်နေတာကိုး။ ဒီမကောင်းမှုလေးကိုပဲ နှစ်သက်နေတာကိုး။ လောလောဆယ်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မတွေ့ချင်ဘူး၊ ဘယ်သူ့ နှစ်သိမ့်သံကိုမှလည်း မကြားချင်ဘူး။ ဘယ်သူ တရားချတာကိုလည်း မခံချင်ဘူး။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် သွားကြတာပေါ့။ ကျွန်တှောနဲ့ တွဲသွားရင် ခင်ဗျားတို့မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ ရောက်လာမှာစိုးလို့ ဒီခရီးမှာ ကျွန်တှောက ပထမဆုံး ရင့်ရင့်သီးသီး လမ်းခွဲထွက်ခဲ့တာပါ။ ခင်ဗျားတို့ အချင်းချင်း ကျေနပ်အားရအောင် ကျွန်တှော့ မကောင်းမှုတွေကို တဖွဖွ ပြောလိုရာ ပြောကြပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ကမ်းကနေ ဟိုဘက်ကမ်းအထိ ရောက်အောင် အထိတော့ သယ်မသွားကြပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
Tags: Diary, Nyi Lynn Seck
Posted by NLS at 9/13/2007 12:46:00 PM0comments Links to this post
ကျွန်တှော ခုတလော အလုပ်တှောတှော ရှုပ်ပါတယ်။ အရှုပ်တွေ လုပ်နေမိတာ ဆိုရင် ပိုမှန်မယ်။ အဓိကကတော့ စကန်ဖတ်ထားတဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို စာသားပြန်ဖှော နေတာပေါ့ဗျာ။ အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာ အားအားယားယား လျှောက်လုပ်နေတယ် ပြောရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။ ကျွန်တှော့အတွက် ဘာအကျိုးရှိလဲ ဆိုရင် ဘာမှကို အကျိုးမရှိပါဘူး။ အချိန်ကုန်တယ်၊ မျက်စိကိုက်တယ်၊ ခေါင်းခြောက်တယ်၊ အိမ်နဲ့ အငြင်းပွားရတယ်။ ပြောပြလည်း ပြောပြတာပဲရှိတယ်။ သူတို့အမြင်မှာ ကျွန်တှော ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးရေးသမား ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်။ သူတို့ပိုက်ဆံ ကျွန်တှော ထိုင်သုံးနေတာ တှောတှောများပြီ။ သူတို့ပြောတာက လုပ်ချင်တာ လုပ်နိုင်ဖို့ရာ လုပ်သင့်တာကို အရင်လုပ်ပါတဲ့။ ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ပိုက်ဆံ လောက်လောက်ငှငှ ရဖို့ရာ သမဿမာအာဇီဝ ဘယ်အလုပ်ကို ဘယ်လောက်ကြာအောင် လုပ်ရမလဲ။ ၁ဝနှစ်လောက် လုပ်ရင်တောင် ကျွန်တှော့အသက်က တှောတှောကြီးသွားပြီ။ ကိုယ်စူးစူးစိုက်စိုက် လုပ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုအတွက် အချိန်ကို အခြားတစ်ခုအတွက် ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင် အားလျော့သွားမှာပဲ။ ဒီတော့ ပိုက်ဆံလိုချင်တယ်၊ လိုအပ်တာ ဝယ်ယူဖို့ ပိုက်ဆံရှိမှဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံရှာဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ ထားပါတော့။
ရုပ်ပုံတွေကို စာသားအဖြစ် ပြောင်းတာ လွယ်လွယ်လေးပါလို့ ထင်သူတွေ ရှိလိမ့်မယ်။ Acrobat8 နဲ့သာထုတ်လိုက် တစ်မိနစ်ပဲလို့ ဆိုကြမယ်။ အိုကေ ကျွန်တှောပြောပြဦးမယ်။ အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးဟာ ရုပ်ပုံတစ်ခုကို မြင်တာနဲ့ ဒါဟာစာလုံး ဒါဟာရုပ်ပုံဆိုပြီး ခွဲခြားသိဖို့ဆိုတာ တှောတှော ခက်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ပရိုဂရမ်တွေ ထည့်သွင်းပြီး သင်ကြားပေးရတယ်။ ဒီလိုသင်ကြားရာမှာ အလွန်တရာ လွယ်ကူတဲ့ အဂဿငလိပ်စာလို စာမျိုးမှာတောင် ကွန်ပျူတာက အတိအကျ သိဖို့ဆိုတာ တှောတှောခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ပါများတော့တတ် ဆိုသလို အခါခါ သင်ကြားပေးတဲ့အခါ နောက်ဆုံး ကွန်ပျူတာက တတ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့အထိ 100% မှန်အောင်သိတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲဆိုတာ မပှေါသေးဘူး။ 98-99% လောက်တော့ မှန်နေပြီ။ စာလုံးရေ တစ်ရာမှာ တစ်လုံး နှစ်လုံးလောက်တော့ မှားသေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ တကယ်လို့များ စာလုံးရေ တစ်သိန်းဆိုရင် အမှားက အလုံးတစ်ထောင် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ထောင် ရှိနေတယ်လို့ တွက်ရပါမယ်။ စာမျက်နှာ ၃ဝဆိုရင် စာလုံးရေက ငါးသောင်းလောက် အောက်ထစ် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှား ငါးရာလောက် ထွက်လာပါတယ်။ ဒီလိုမှားရာမှာ မူရင်း စာလုံးပေါင်းအမှား ရှိသလို၊ စာကို စကန်ဖတ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်စဉ်က အားနည်းချက်ကြောင့် မပီမသတာမျိုး၊ မူရင်းစာသားတွေ ဖတ်မရအောင် ပျက်နေတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကို ကွန်ပျူတာက မှန်သလား မှားသလား သေချာ မသိပါဘူး။ လူက လိုက်ပြင်ပေးရပါတယ်။
ဒီလိုပြင်တာ လွယ်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ဥပမာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာတွေကို အမှားပြင်မယ် ဆိုပါတော့။ ပြင်ရမယ့် စာကလည်း မပီဝိုးတဝါးနဲ့မို့ မူရင်းစာလုံး ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသေချာတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်နေတယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီစာလုံးနေရာမှာ အစားထိုး ဖြည့်နိုင်ဖို့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာလုံးတွေ၊ အသုံးအနှုန်းတွေကို မဖြစ်မနေ သိထားဖို့ လိုလာပါပြီ။ ကိုယ်သာ လေ့လာမထားရင် ဒီနေရာမှာ မလိုက်ဘက် မညီညွတ်တဲ့ စာလုံးတွေ ထည့်မိသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့ အားလုံး ပြင်ပြီးသွားတဲ့အခါ အဲဒီစာတွေအားလုံးကို အစကနေပြန်ပြီး သဒဿဒါစစ်ရပါတယ်။ အဂဿငလိပ်တွေ ရေးတိုင်းလည်း သဒဿဒါမှန်တယ်၊ စာလုံးပေါင်း မှန်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ နောက်တစ်ခုက ကွန်ပျူတာက ပထမ စစ်ဆေးချိန်မှာ သူ့အလိုအလျောက် မှတ်ချင်ရာ မှတ်လိုက်ပြီး အမှားအဖြစ် မဖှောပြတဲ့ စာလုံးတွေ ရှိသေးတယ်။ ဥပမာ မူရင်းစာလုံး Eရဲ့ဘေးမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒေါင်လိုက် ခြစ်ရာတစ်ခုက ထိကပ်နေတယ်ဆိုပါတော့။ အဲဒီစာလုံးကို ကွန်ပျူတာက Bလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အမှားတွေကိုလည်း ဒီအဆင့်မှာ ပြန်စစ်ပေးရပါတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ စာလုံးပေါင်း အမှားတွေ၊ သဒဿဒါအမှားတွေကိုတော့ ကွန်ပျူတာ အကူအညီနဲ့ ရှာဖွေ ပြင်ဆင် ရပါတယ်။ အချို့စာလုံးတွေကိုတော့ ခေတ်သစ် အဘိဓာန်အရ မှားနေပေမယ့် ခေတ်ဟောင်းအသုံးမို့ မှားသှောလည်း မပြင်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းထားရတယ်။ ဒီလို ပြောင်းလဲရာမှာ စာသားတွေကြားထဲ ရုပ်ပုံတွေ ပါလာရင် ပိုရှုပ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့ ရုပ်ပုံ ရချင်ရင် လူက လိုက်သတ်မှတ်ပေးရပြန်ပါတယ်။
Acrobat 8 Professional မှာ OCR ဆိုတဲ့ Optical Character Recognition ဆိုတဲ့ စနစ်ပါပါတယ်။ တှောတှောလေးလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားနည်းချက်တွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီလို ရုပ်ပုံတွေကို စာသားအဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေဟာ ဒှေါလာ သုံးလေးရာကနေ နှစ်ထောင်သုံးထောင်အထိ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကသာ ပရှောဖတ်ရှင်နယ်အဆင့် စစ်ဆေးတည်းဖြတ်မှု လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Acrobat ကတော့ မူလတန်း အဆင့်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
နောင်တစ်ချိန် မြန်မာစာကို ဒီလိုနားလည်နိုင်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ ပှေါပေါက်လာလို့ရှိရင် အကျိုးကျေးဇူး အများကြီး ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ ဒီအိုစီအာရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို နားလည်တဲ့သူ တှောတှော နည်းပါးနေသေးတယ်။ မြန်မာစာကို အဲဒီလို နားလည်နိုင်ဖို့ ကွန်ပျူတာကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ရာ စကားလုံးတွေ ကတော့ တည်ဆောက်ပြီးသွားပြီ။ ဒီစာလုံးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ ရှိခဲ့ရင်တော့ မြန်မြန် ပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တှောသာ အသက် ၂ဝအရွယ်လောက်က အဲဒါတွေကို သိခဲ့ရင် လေ့လာလိုက်စား ခဲ့မိမှာပဲ။ အခုတော့ အသိဉာဏ် ကင်းမဲ့ရာ ကာလထဲမှာ ကျွန်တှော့ရဲ့မြင်းဟာ အတောင်မပေါက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ လမ်းလျှောက်နေရဆဲပဲ။ ကဲပါလေ ဒါတွေဟာ ဘာအကျိုး ရှိလဲလို့ တွေးမိကြမယ်။ အများကြီး ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ဒါတွေဟာ Searchable Database ကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်တယ်။ လူပြိန်းကနေစပြီး Scholar တွေအတွက် အများကြီး အကျိုးရှိတာကို သုံးကြည့်ကြရင် သိလာပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ အိုစီအာစနစ် မြန်မြန် ပှေါလာပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အဂဿငလိပ်လို ရေးထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သုတေသန အသင်းက ဂျာနယ်တွေကို ပြန်ပြောင်းတာ တှောတှော ပြီးသွားပြီ။ UCL အတွက်လည်း လုပ်ပေးနေတယ်။
Tags: Myanmar OCR, Diary, Knowledge
Posted by NLS at 9/13/2007 12:37:00 PM0comments Links to this post
Labels: Diary, Knowledge, NLP
Technorati Tags Generator for Blogger
အထက်က ကျွန်တှော့ ကွန်ပျူတာမှာ ပှေါနေတဲ့ ဘလော့ဂင်း ဧရိယာရဲ့အောက်မှာ နောက်ထပ် ထူးခြားတဲ့ဟာ တစ်ခုကို မြင်ကြမှာပါ။ ဒါက Tags Generator ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် တက်ခ် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို နားလည်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ Tag ဆိုတာ တကယ်တော့ Keyword (or) Label ပါပဲ။ ကိုယ်ရေးတဲ့ ပိုစ့်တွေကို အမျိုးအစား သတ်မှတ် ပေးထားတဲ့ လေဘယ်လ် လေးတွေပါ။ တှောတှောများများ လွဲမှားနေတာက ပိုစ့်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တက်ခ် လုပ်ကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တက်ခ် လုပ်ကြတယ် ဆိုပြီး ပြောသံရေးသံတွေ ကြားရပါတယ်။ တကယ်ဆို အဲဒီလို လုပ်တာကို link လုပ်တယ်လို့သာ ဆိုသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တှောက နည်းပညာ အကြောင်း ရေးတယ်ဆိုရင် အဲဒီပိုစ့်ကို Technology လို့ Tag လုပ်လိုက်မယ်။ ပြီးရင် ကျွန်တှောရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ တူညီတဲ့ ပိုစ့်တွေကို အဲဒီ Tag Label ကိုလိုက်ပြီး ရှာဖွေလို့ ရပါတယ်။ ဆက်စပ်နေတဲ့ ပိုစ့်တွေကို Related Posts အနေနဲ့ ပြပေးတဲ့ သဘောပါပဲ။ ကျွန်တှောတို့ အခုသုံးနေတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ အဲဒါနဲ့ အလားသဏဿဍာန် တူတဲ့ Links to this post ဆိုတဲ့ Function ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် တက်ခ် ဆိုတာက အမျိုးအမည် သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပြီး Related Posts ကသာ ဆက်စပ်ရာ ပိုစ့်တွေလို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဘလော့ဂါမှာ လေဘယ်လေးတွေ တွေ့ကြမှာပါ။ တချို့လည်း လေဘယ်တွေကို ပွထနေအောင် ပေးကြတယ်။ အဲဒါဟာ တက်ခ် သဘောတရားကို နားမလည်သေးလို့ပါ။ ဥပမာ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်က သူ့ဘလော့ဂ်မှာ သူ့ပိုစ့်တစ်ခု အနေနဲ့ဆို Sci-fi, Horror, Fiction, Humor စသည်ဖြင့် အမည်ကွဲလေးတွေ ပေးလို့ရပါတယ်။ သူက သူ့ဘလောဂ်မှာ စာပဲ ရေးတာကိုး။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ General Blog တစ်ခုကနေပြီး တောင်ကြီးမှာ ခရီးသွားရင်း ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခုကို Taungyi, Travel, Love, Diary, Essay စသည်ဖြင့် ပေးထားမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီပိုစ့်ဟာ တကယ်တမ်း ဘာကို ရည်ညွှန်းချင်တဲ့ ပိုစ့်လဲဆိုတာ မထင်ရှားတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပိုစ့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံး Tags, Label တွေကိုသာ ရွေးချယ် သင့်ပါတယ်။
တက်ခ်ဆိုတဲ့ဟာကို လုပ်ဖို့ရာ ကြားထဲက အခံတစ်ခု လိုပါသေးတယ်။ ဥပမာ အခုကျွန်တှော ဘလော့ဂ်မှာ အသုံးပြုထားတာ Technorati ကွန်ယက်အတွက် Tag ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်ကို ကျွန်တှောက Technology လို့သတ်မှတ်ထားရင် အဲဒီကွန်ယက်ထဲက အခြား Technology နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပိုစ့်တွေနဲ့အတူ ကျွန်တှော့ပိုစ့်ကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီ Tagsဟာ အဲဒီ Tecnorati ကွန်ယက်အတွက်သာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဘယ်ကွန်ယက်ကို အဓိကထားပြီး တက်ခ် လုပ်မယ်ဆိုတာကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီ တက်ခ်တွေဟာ အရေးပါပါတယ်။ အင်တာနက် အသုံးပြုသူနဲ့ ကွန်ယက် အများစုဟာ အဲဒါတွေကို ပထမဆုံး ရှာဖွေတာပါ။ ကိုယ့်တက်ခ်တွေက အရေးပါ ထိရောက်တဲ့ တက်ခ်တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ပိုစ့်ကို စိတ်ဝင်စားသူ နည်းသွားမှာပါ။ နောက်တစ်ခုက မြန်မာလို တက်ခ်လေဘယ်တွေ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက အင်တာနက် ယူဇာတွေကို ဆွဲဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင် မြန်မာလို တက်ခ် တွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ မြန်မာလို တက်ခ်တွေကို မြန်မာဖောင့်ရှိတဲ့ မြန်မာတွေသာ နားလည်ကြတာမို့ပါ။
အခု ဒီဂျင်နရေတာလေးက အဲဒီလို တခ်လေးတွေ ထည့်လို့ရအောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို အသုံးပြုဖို့အတွက် မီးလျှံမြေခွေး (Copyright) ဘရောက်ဇာကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက တန်းပလိတ်ထဲက ကုဒ်ဒင်တွေကို ဝင်ပြင်စရာ မလိုဘဲ ဘရောက်ဇာမှာ အက်အင်လေး တစ်ခု ထည့်လိုက်တာပါ။
Grease Monkey FF Extention ကိုထည့်သွင်းပါ။ (https://addons.mozilla.org/firefox/748/)
ဘရောက်ဇာကို restart လုပ်ပါ။ ဘရောက်ဇာ အောက်ခြေတွင် မျောက်ပုံလေး ပှေါလာပါမည်။
အထက်ပါလင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပါကုဒ်ကို သွင်းယူပါ။ အလိုအလျောက် လုပ်သွားပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် နှစ်သက်ရာကို ဤနေရာတွင် ရွေးပါ။ (http://userscripts.org/scripts/search?q=technorati+)
ပြီးပါပြီ။ သင့်ဘလော့ဂ်တွင် ပိုစ့်အသစ်တင်ရန် ဖွင့်လိုက်လျှင် တက်ခ်များ ထည့်သွင်းနိုင်သော နေရာလေးတစ်ခုကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ခြေတွင် ကျွန်တှော အသုံးပြုထားသော Tags များကို နမူနာထား လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
ဒီ တက်ခ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ အခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ် နည်းလမ်း တစ်မျိုးကို တေဇာရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဖတ်ရှုလေ့လာ နိုင်ပါတယ်။ (Related Link)
Tags: Tags, Tagging, Technology, Widgets, Technorati Tags Generator for Grease Monkey
Posted by NLS at 9/13/2007 12:01:00 PM0comments Links to this post